War ဖြင့် ဇာတ်ကား66 ကား
mmbusticket ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ အက်ရှင်ကားကောင်းလေးပါ နာမည်ကြီး London has fallen တို့လို ဇာတ်ကားလေးတွေကြည့်ဖူးရင်သိကြမှာပါအဲ့လိုအကြမ်းဖက်အက်ရှင်ဆန်ဆန်လေးပါပဲဗျ
ဒီထဲမှာတော့ အာရပ် အကြမ်းဖက်သမားတွေက ဗြိတိန်နိုင်ငံက အီရန်သံရုံးကို ဝင်စီးတာဗျ အာရပ်ကော ဗြိတိန်ကော အီရန်သံရုံးကောဆိုတော့ခေါင်းရှုပ်သွားလားတော့ မသိ?
အာရပ် တွေကတကယ်တော့အီရန်မှာ မတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့အာရပ်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးရေး အာရပ်ဒေသမှာအီရန်ပါရှားတွေရဲ့မတရားဖိနှပ်မှုတွေကို လျော့ချပေးရေးစတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေ အတွက် ဗြိတိန်အီရန်သံရုံးက အီရန်လူမျိုးဝန်ထမ်းတွေကိုဓားစာခံဖမ်းပြီး ဗြိတိန်အစိုးကနေတစ်ဆင့်အီရန်ကိုလှမ်းညှိခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးပါ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအင်အားမကြီးတော့အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဗြိတိန်ကိုကြားဝင်စေ့စပ်ပေးလိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါ ဗြိတိန်ကိုနစ်နာစေလိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့
ဗြိတိန်က အဲ့တော့ကိုယ့်နိုင်ငံထဲဖြစ်တာဆိုတော့လဲအရှုပ်တော်ပုံထဲဝင်ရှင်းပေးရတော့တာပေါ့ ဇာတ်ကားTITLE ပေးထားတဲ့အတိုင်း6ရက်အတွင်းဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကတော့ …..ဘာသာပြန် အညွန်းကတော့ Pyae Xein Sett ပါ
ဒီကားလေးကတော့ ယူကရိန်းနိုင်ငံသားလေး ယူရီ ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် သူရဲ့ လက်အောက်ခံဖိနှိပ်ခံဘဝမှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲအတွေ့အကြုံတွေကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် သူငယ်စဉ်ကတည်းက ချစ်ခဲ့ရတဲ့ နာတာလ်ကာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရှိတယ် လူတွေပြောပြောနေကြတဲ့ မြင်မြင်ချင်းအချစ်ပေါ့ ယူရီတို့နေတဲ့ရွာဟာ ယူရီ ငယ်စဉ်ကလေးကတည်းက ‘ဇာ’လို့ခေါ်တဲ့ ရုရှားလူမျိုးရဲ့ လက်အောက်ခံဘဝမှာနေခဲ့ရပါတယ် နောက် သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ‘ဇာ’ဟာ ဘိုးလ်ရှစ်ဗစ်တွေ သတ်တာခံလိုက်ရပါတယ် လက်အောက်ခံဘဝကလွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောပေါ့ ဒါပေမယ့် မကြာခင်မှာပဲ ဆိုဗီယက်တွေ ယူကရိန်းနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်လာပါတော့တယ် ယူရီဟာ ပန်းချီအနုပညာပါရမီပါတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် သူ့ရဲ့ပါရမီနဲ့နိုင်ငံ့အတွက် လွတ်လပ်မှုကိုရယူနိုင်ရန် ကီရပ်မှာရှိတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေဆီ လွတ်လပ်ရေးအတွက် အတူတိုက်ခိုက်ဖို့ ရွာကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ် ယူရီဟာသူ့ရဲ့ပါရမီကိုအသုံးချပြီး သူလိုချင်တဲ့လွတ်လပ်မှုကို အရယူနိုင်မှာလား… သူဘာတွေကြုံတွေ့ရဦးမှာလဲ ရွာမှာကျန်ခဲ့တဲ့ နာတာလ်ကာနဲ့ရော ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ပါ့မလားဆိုတာတော့ ဒီကားလေးမှာ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…
သူတို့အားလုံးကို ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပို့နိုင်စေရမယ်လို့ ကတိပေးထားတယ်….ဆိုလိုတာက တစ်ဝက်လောက်ကို လိမ်လိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့” ဒီစကားကိုတော့ တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦးက ဂျပန်ကျွန်းဆွယ်ဖြစ်တဲ့ အီဝိုးဂျီဝါးကျွန်းကို မသိမ်းခင် တပ်ခွဲမှူးအရာရှိကို ပြောနေတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်.။ပြောချင်တာက ဥပမာလူ(၃၀၀)တက်ရင် ၁၅၀သေမယ် ၁၅၀အသက်ရှင်မယ်ပေါ့လေ။ ..ဒီဂျပန်ကျွန်းတက်သိမ်းမယ့် စစ်ဆင်ရေးမှာ သူကိုယ်တိုင်လည်း အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ဖို့ ၇၀ရာနှုန်းလောက်သေချာနေပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူထက် လက်အောက်ငယ်သားတွေ အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံပါပဲ…. Flags of Our Fathers ဆိုတာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း အီဝိုးဂျီဝါးကျွန်းကိုတက်သိမ်းစဉ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်မှီငြိမ်းဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်….. ဒီကျွန်းကိုတက်မသိမ်းခင် ရေတပ်ကအမြှောက်ကြီးတွေက ဗုံးမိုး ရက်(၂၀)လောက်ရွာခဲ့လို့ မြက်ပင်တောင်မရှိတော့ဘူး…. သို့ပေမယ့် ဂျပန်တို့ရဲ မြင့်မြတ်သောကျွန်းအဖြစ်ဦးထိပ်ထားတဲ့ ဒီကျွန်းကိုရဖို့ အမေရိကန်တို့ အရာအားလုံးနီးပါးစတေးခဲ့ရတယ်… ကျွန်တော်ဒါတွေပြောလို့ စပွိုင်လာဖြစ်သွားတယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့…တကယ့်ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကအဖြစ်ဆုံးအကြောင်းအရာက အီဝိုးဂျီဝါးကျွန်းရဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာ စိုက်ထူခဲ့တဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်… ဒီအလံရဲ့နောက်ကွယ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ အကောင်းဆုံးအပိုင်းဖြစ်လို့ ထိန်ချိန်ထားပါရစေ…. ဒီကားက စစ်ကားထဲမှာဆို တကယ့် ဂန္တဝင်စားရင်းထဲကိုထည့်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်..ဒါရိုက်တာက Clint Eastwood ကြောင့် လို့လည်းမထင်လိုက်ပါနဲ့…ကျွန်းသိမ်းစဉ်မှာ ကြည်း၊ရေ၊လေ (၃)ခုပေါင်းပြီး ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပုံတွေကို တကယ့်ထိတ်လန့်စရာ စစ်မြေပြင်အတိုင်းရိုက်ပြနိုင်သလို စစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေ တိုက်ပွဲဝင်စစ်သည်တွေရဲ့ ခံစားချက်အဖုံဖုံ ခံယူချက်အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်း ရိုက်ပြနိုင်ခဲ့တယ်…ဒါ့အပြင် အစိုးရပိုင်း ပြည်သူနဲ့ စစ်သည်တွေကြားရဲ့ ဆက်နွယ်မှုတွေကိုလည်း ခင်ဗျားတို့မြင်ရလိမ့်မယ်… ဒီကားက အော်စကာ ဆန်ကာတင်(၂)ဆုစာရင်းဝင်ခဲ့သလို အခြားဆု(၁၅)ဆုလည်းရရှိခဲ့တယ်… ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး Clint Eastwood ကတော့ AARPက ချီးမြင့်တဲ့အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုရရှိခဲ့တယ်.. ကိုင်း စစ်ကားကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးစာရင်းဝင် တစ်ကားတင်ဆက်လိုက်ပါပြီ… ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…..
အခုတင်ပေးမှာကတော့ လူနဲ့တိရစ္ဆာန်အကြား ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ မိသားစုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စစ်၏သဘောတရား စတဲ့ ခံစားမှုရသမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားနာမည်ကတော့ အပေါ်ကအတိုင်း War Horse ပါ...စစ်မြင်းတစ်ကောင်အကြောင်းပေါ့…
Jurassic Park, Jaws စတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဦးစားပေးဇာတ်ကားတွေ၊ Saving Private Ryan၊ Schindler’s List၊ စတဲ့ စစ်ပွဲဦးစားပေးဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg က ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်…စာရေးဆရာကြီး Michael Morpurgo ရဲ့ နာမည်ကျော် War Horse စာအုပ်ကို မှီငြမ်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်း
နိုင်ငံအသီးသီးက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြင်းပေါင်း ရှစ်သန်းကျော်ရဲ့ သနားစရာဘဝကို တစ်ကောင်တည်းနဲ့ ကိုယ်စားပြု ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်…ပြီးတော့ Loki မင်းသား Tom Hiddleston နဲ့ Sherlock Holmes မင်းသား Benedict Cumberbatch တို့ကလည်း အားဖြည့်ကူညီထားပါတယ်….ဇာတ်လမ်းအညွှန်းပထမကမ္ဘာစစ်မစမီ အင်္ဂလန်ပြည်မှာ လယ်ထွန်ဖို့အတွက် မြင်းတွေကို အသုံးပြုခဲ့တာပါ…ဈေးတွေမှာ မြင်းတွေကို လေလံဆွဲရောင်းချရာကနေ ဇာတ်လမ်းရဲ့
အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Joey ဆိုတဲ့မြင်းလေးကို Ted Narracott ဆိုတဲ့လူက ဝယ်ယူခဲ့ရာက စတာပါ…လယ်ထွန်တတ်တဲ့ မြင်းဝယ်ရမယ့်အစား စစ်မြင်းလေးကို ဈေးကြီးပေး ဝယ်ချလာတဲ့ Ted တို့ မိသားစုမှာ ပြဿနာမျိုးစုံတက်တော့တာပါပဲ…ဒါပေမဲ့ Ted ရဲ့သားဖြစ်သူ Albert က မြင်းလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်ကြားပေးပြီး ပြဿနာအချို့ကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီမြင်းလေးကို စစ်တပ်ကို ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်…ဒီလိုနဲ့ ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ
မြင်းလေးကို အသုံးပြုဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သူ့ကိုအရမ်းချစ်တဲ့ Albert ကတော့ မြင်းလေးနဲ့ ဝေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရာကနေ သူ့ရဲ့မြင်းလေးနဲ့ ပြန်တွေ့ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပုံတွေကို ရိုက်ကူးထားတာပါ…စစ်ပွဲအတွင်း မြင်းတွေကို အမျိုးမျိုးအသုံးချပုံတွေ၊ စစ်သားတွေရဲ့ ခက်ထန်မှုတွေ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ စစ်သားတွေရဲ့ ချစ်စဖွယ်အပြုအမူတွေ၊ စစ်ပွဲတွင်းအဖြစ်အပျက်တွေကိုတခမ်းတနား ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်တာမို့Channel Myanmar ပရိသတ်ကြီးလည်း အကြိုက်တွေ့မယ်လို့ မျှော်လင့်
ပါတယ်…စစ်ကားလည်းဖြစ်တဲ့အပြင် ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg ရဲ့ လက်ရာဆိုတော့ ထွေထွေထူးထူးညွှန်းစရာမလိုတဲ့အပြင်အမှတ်တရလေးသိမ်းထားစေဖို့အတွက် Blu-Ray 1080p 5.1 CH, Blu-Ray 720p တို့ဖြင့် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်….ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Paing ပဲဖြစ်ပါတယ်….
အိန္ဒိယဇာတ်ကားတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် Urvi ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Ratingလည်း 7.1ထိရထားတော့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့…အိန္ဒိယဆင်းရဲသား တံငါသည်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နာနီမှာ သမီးငယ်အချောလေးနှစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဆင်းရဲပြီးဥစ္စာပစ္စည်းမရှိပေမယ့် သမီးငယ်လေးနှစ်ယောက်ရှိနေတဲ့အတွက် သူ့ဘဝဟာ ပြည့်စုံလွန်းနေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာ ခေါင်းပုံဖြတ်တတ်တဲ့ သူဋ္ဌေးတစ်ယောက်ဆီကနေ ငွေချေးယူမိပြီး ပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့သမီးအကြီးဖြစ်သူကို အတင်းအဓမ္မသိမ်းယူပါတော့တယ်။ သူဋ္ဌေးဖြစ်သူရဲ့ အဓမ္မကျင့်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သမီးအကြီးဖြစ်သူက အရှက်အသက်ကိုလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီခါမှာတော့ အငယ်ဆုံးသမီးလေးဖြစ်သူက သူ့အဖေနဲ့အစ်မရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကို အသက်အရွယ်ကြီးပြင်းလာတဲ့တစ်နေ့မှာပဲ လက်စားချေခွင့်ရလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကို အမိအရဆုပ်ကိုင်ပြီးဘယ်လိုလက်စားပြန်ချေသွားမလဲ၊ ဘယ်လိုလှည့်ကွက်တွေရှိလာဦးမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှု့ရမှာပါ။ Rating လည်း 7.1 ထိရထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးလို့ပြောပါရစေ။
ဒီကားက ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက မဟာမိတ် စစ်သင်္ဘောတွေကို တစ်ဒိန်းဒိန်းပစ်ခေတ်ပြီး ရောက်အောက်ကို နှစ်မြှုတ်ခဲ့တဲ့ ဂျမာန် u-571 စစ်သင်္ဘောအကြောင်းကို အဓိက ထားရိုက်ပြထားပါတယ်… ဂျာမန်စစ်သင်္ဘောတွေရဲ့ ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခြင်းကို ဖွဲအိတ်ကြီးလို ခံနေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းက Enigma ဆိုတဲ့ ဝှက်စာကြောင့်ပါ… ဒီကားအညွှန်းကို မပြောခင် အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ Enigma ဆိုတဲ့ ဝှက်စာ အကြောင်းကိုပြောပြပါ့မယ်… ဒါတွေမသိလည်း ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ စစ်ကားကြီးဖြစ်ပေမယ့် သိသွားတဲ့အခါမှာ ဗဟုသုတလည်းရတဲ့အပြင် ကြည့်ရတာ ဇာတ်ရှန်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်သွားစေနိုင်တာကြောင့်ပါ.. Enigma ဆိုတာက ပထမကမ္ဘာစစ်နဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြားကာလမှာ ဂျာမန်တွေတီထွင်ခဲ့တဲ့ ဝှက်စာ စက်ဖြစ်ပါတယ်။ Mechanical နဲ့ electrical ကို ပေါင်းထားတဲ့ စက်ဖြစ်ပြီး U boat နဲ့ ၈ျာမန်စစ်သင်္ဘောတွေက ပင်နယံ ၄ ဆင့်နဲ့ အထက်ပါတဲ့ Enigma ကို သုံးခဲ့ပါတယ်။ ပင်နယံဝိုင်းတွေမျှားလေ ပိုလုံခြုံလေမို့ နောက်ပိုင်းမှာ ပင်နယံဝိုင်း ၈ ဆင့်အထိသုံးခဲ့ပါတယ်။ Enigma ဟာ လက်နှိပ်စက်လိုဖြစ်ပြီး ဝှက်စာစနစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် ခလုပ်တွေကို ရိုက်လိုက်ချိန်မှာ မူလ အက္ခရာမပေါ်ဘဲ ဝှက်စာသွင်းထားတဲ့ အက္ခရာသာ ပေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်နယံတွေကို စီစဉ်ထားသိုတာရယ်၊ ဝှက်စာထည့်သွင်းတာရယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဝှက်စာခက်ခဲမှုပြောင်းလဲပါတယ်။ ဝှက်စာဖော်တဲ့အခါမှာလည်း Enigma စက်ကထွက်လာတဲ့ code တွေကို ပြန်ရိုက်ပြီးဖော်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ပင်နယံဝိုင်း ၄ဝိုင်းပါတဲ့ Enigma စက်မှာဆိုရင် အက္ခရာတစ်လုံး မှန်ကန်စွာခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ အကြိမ်ပါင်း ၄၅၆၉၇၆ ကြိမ် လိုပါတယ်။ ဒါဟာ “A” ဆိုတဲ့ အက္ခရာလိုမျိုး alphabet တစ်ခုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါကျတစ်ကြောင်းအတွက်ခန့်မှန်းရပါက ဘယ်လောက်ခက်မည့်အကြောင်းပြောဖွယ်ရာမလိုတော့ပေ… ဒါကြောင့် codeဖော်တဲ့စက်ကို မရရင် ဖော်ဖို့ အရမ်းခကိပါတယ်။ ဒီ Enigma ကုတ်ကြောင့်ပဲ မဟာမိတ်တွေဟာ ဂျာမန်ကိုလုံးဝမယှဉ်နိုင်ခဲ့တာပါ… ဇာတ်ကားအကြောင်းကိုဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင် ပစိဖိတ်ရေပြင်မှာ U-571 ဟာ ဗြိတိန်ရေတပ်ရဲ့ ရေမြှုပ်မိုင်းဒဏ်ထိပြီး အင်ဂျင်တွေသုံးမရ စက်ဆရာတွေကသေကုန်လို့ ရေထဲမျောနေရင်း တပ်ကူရေယာဉ်ကိုစောင့်နေရတဲ့အခြေအနေကို အမေရိကန်တွေသိသွားတယ်… ဒီတော့ အမေရိကန်ရဲ့ အစီအစဉ်က U-751 ကို နာဇီယူဘုတ်ပုံစံပြောင်းပြီး ဝင်စီးမယ် …Engima ကုတ်ဖော်စက်ကို ယူမယ် … U-751 ကို အစဖျောက်မယ်… ဒီစက်ရရင် ဂျာမန်ကို စစ်နိုင်ဖို့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတာကိုးး…. သူတို့ရဲ့ အစီအစဉ်က တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်… အမေရိကန်တွေအောင်မြင်မလားဆိုတာကိုတော့ စစ်ကားကြိုက်တဲ့သူတွေအဖို့ နင်းကန်ကြည့်သင့်တယ်… ခင်ဗျားဟာ သမိုင်းနောက်ခံဇာတ်လမ်းမျိုးကိုကြိုက်တယ် ..အချက်အလက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံတွေကလည်း Realism ဆန်တာမျိုးဖြစ်ရမယ် ..အပစ်အခတ်နဲ့ စစ်ကားမျိုးလည်းကြိုက်တယ်.. Rating တွေလည်း ကောင်းရမယ် ဆုတွေလည်းရတဲ့ကားမျိုးမှကြိုက်တော့ ဆိုရင်တော့ ခံစားကြည့်သင့်တယ်…
စစ်ကားတွေထဲမှာ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်သိသလောက် Saving Private Ryan (1998) နဲ့ Hacksaw Ridge (2016) စတဲ့နာမည်ကြီးစစ်ကားတွေဟာ ရန်သူရဲ့ အဓိက အခြေချတပ်စွဲထားတဲ့နေရာတွေကို အသက်စွန့်ပြီး ဝင်သိမ်းတာကို အခြေပြုရိုက်ကူးထားပါတယ်…ဒီလိုခြေကုတ်ယူထားတဲ့နေရာဆိုတာနဲ့ ရာနှုန်းပြည့် ပစ်ကွင်း မြင်ကွင်း အရာအားလုံးကို အသာစီးရနေပါတယ်…… ဒါ့ကြောင့် အပေါ်က ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ စစ်ကားကြီး(၂)ကားမှာ တက်သိမ်းတဲ့သူတွေဟာ အဲ့ဒီနေရာလေး တစ်နေရာ ရဖို့အရေး အလောင်းတွေ တောင်လိုပုံခဲ့ရပါတယ်…. The Thin Red Line(1998) ဟာလည်း ဂျပန်တွေ သိမ်းထားတဲ့ ပစိဖိတ်စစ်မြေပြင်ရှိ Guadalcanal အရပ်က အော်စတန်တောင်ကုန်းကို အမေရိကန်တို့ ပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ တိုက်ပွဲကို အဓိကထား ရိုက်ကူးထားတာပါ….ဒီစစ်ကားရဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းတွေက Saving Private Ryan (1998) နဲ့ Hacksaw Ridge (2016) တို့ နဲ့တောင် တန်းတူတောင်ထားလို့ရမယ်ထင်တယ်… အော်စတန်တောင်ကုန်းက ကျယ်တဲ့အပြင် ချိုင့်ဝှမ်းတွေ ချုံတွေ များပြားလွန်းပါတယ်…ဂျပန်တွေဆိုတာကလည်း လာရောက်သိမ်းမယ့် အမေရိကန်တို့ရန်ကို ကြိုသိနေလို့ အခိုင်အမာ ခံစစ်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်… ဒီစစ်ကားကိုမကြည့်ခင် ခင်ဗျားဟာယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် ကော်ဖီ၊ ဆေးလိပ်၊ ပြာခွက် ၊တစ်ရှူးစတာတွေကိုယူထားပါ…မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ ဝါးရင်အသံမမည်တဲ့ အစားအစာမျိုး နဲ့ တစ်ရှူးကိုကြိုယူထားပါ…ဘာလို့ဆို ဇာတ်လမ်းစပြီး ၁၅မိနစ်မှာလောက်ကထဲက ဂျပန်တွေ အခြေချထားတဲ့ တောင်ကုန်းကို သွားသိမ်းတဲ့ စစ်ကြောင်းနဲ့အတူ ခင်ဗျားဟာ မြောပါသွားလိမ့်မယ်…စစ်သားတွေရဲ့ပူပန်မှုတွေအခက်အခဲတွေကို သူတို့နည်းတူ ခင်ဗျားတို့ ထပ်တူထပ်မျှခံစားနေရလိမ့်မယ်… အမြှောက်ဆံတဝုန်းဝုန်း သေနတ်သံ တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ တကယ့်စစ်ပွဲထဲကို ကိုယ်တိုင်ရောက်နေသလိုမျိုးကြီးခံစားနေရလိမ့်မယ်.. ဘယ်အချိန်များ ကျည်ဆံဖျားမှာ အသက်ပါသွားမလဲ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့….ဇာတ်လမ်းနဲ့ တင်ဆက်ပုံကလည်း အရမ်းကိုကောင်းလွန်းတဲ့အပြင် သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း တကယ့်နာမည်ကြီးမင်းသားတွေကြီးပဲဆိုတော့ ဒီစစ်ကားဟာ အော်စကာဆု(၇)ဆုအတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ခဲ့သလို အခြားဆု(၂၀)ဆုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော်ပြောတာ ဟုတ်မဟုတ်ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…
Netflix က တင်ဆက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တော်တော်များများဟာ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည် ရိုက်ကူးထားတာ များပါတယ် ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ဂျာမန်တွေကို စစ်ရှုံးအောင် ဒက်ချ် တော်လှန်ရေး တပ်တွေ အရေးသာအောင် တရားမဝင်ဘဏ် ဖွင့်လှစ်ပြီး နိုင်ငံ နဲ့ လူမျိုး အတွက် ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ဗန်ဟော မိသားစု ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇတ်လမ်းလေးပါ…. ဝယ်လီဗန်ဟော ဟာ ဘဏ်ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မျိုးချစ်စိတ် ရှိတဲ့ လူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဂျာမန်တွေ ဟာ ဘဏ်တွေထိပါ ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး စီးပွားရေး ဆိုင်ရာအရ တော်လှန်ရေး နဲ့ နိုင်ငံရေးတွေမှာ ဝင်ပါမှု မရှိအောင် ပြုလုပ်ကြပါတယ်… တစ်ချို့ လူတွေဆို စီးပွားရေးမကောင်းလို့ သတ်သေတဲ့သူတွေက သတ်သေကြပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့ ဝယ်လီ ဆီသို့ လူတစ်ဦးရောက်လာပါတယ် တော်ဝင်ရေတပ်အရာရှိ ဗွန်ဒယ်ဘယ်ရီ ဖြစ်ပြီး ဗန်ဟော မိသားစု ဟာ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘက်မှာ အကျွမ်းတဝင် ရှိပြီး နာမည်ရထားသူများ ဖြစ်တဲ့အတွက် စီးပွားရေးသမားများကို ပေါင်းစုပြီး လျို့ဝှတ်ဘဏ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ဖို့ တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်… ထိုဘဏ် မှာ စီးပွားရေးသမားတွေ ရင်းနှီးမြုတ်နှံပြီး စစ်ပွဲ ကာလ အတွင်းတော်လှန်ရေး တပ်တွေအတွက် ပံ့ပိုးပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး စစ်ကြီးပြီးတဲ့ အခါ အရင်း ရော အမြတ်ပါ အစိုးရ က ပြန်လည်ပေးအပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်… ဒီလုပ်ငန်းအတွက် နိုင်ငံ နဲ့ လူမျိုး အတွက် ဗန်ဟော မိသားစုထဲက ဝယ်လီ ဗန်ဟော တစ်ယောက်သာ စတင်ခဲ့ပါတယ်… အဓိက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ဗန်ဟောမိသားစု ဟာ ဂျာမန်တွေ မသိအောင် စီးပွားရေးသမားတွေကို တိတ်တစိတ် စုစည်းပြီး လျို့ဝှတ်ဘဏ် ဖွင့်ရမယ့် အရေးဟာ အသက်ဘေး နဲ့ နီးနီးလေးသာ ဖြစ်ပါတယ် ဂျာမန်တွေက အလွန်ရက်စက်ပြီး ညှာတာမှု ကင်းမဲ့ပါတယ်… ဒီလို ဘေးရန်တွေကြားကနေ ဗန်ဟော မိသားစု က စစ်ပွဲနိုင်အောင် ဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးမလဲ ဘယ်လိုတွေ အနစ်နာခံရတယ် ဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါစို့….
စစ်ကားဟေ့ဆိုလျှင် BLACK HAWK DOWN ၊AMERICAN SNIPER၊LONE SURVIVOR၊ SAVING PRIVATE RYAN တို့လို ကျည်ဆံသံတဝီဝီ အမြောက်ဆံတဝုန်းဝုန်းတွေပါတဲ့ကားမျိုးမှ သဘောကျတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့ ယ္ခုThe Messenger(2009) ဇာတ်ကားကိုကြည့်ဖို့ အတော်ကြီးကို အားမွေးရပါတယ်….ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဇာတ်ကားက WAR အမျိုးအစားဖြစ်ပေမယ့် Drama ဘက်ကိုဦးစားပေးထားလို့ပါပဲ… WAR အမျိုးအစားဖြစ်လို့ ခဏတော့ကြည့်လိုက်မှဆိုပြီး မြည်းကြည့်လိုက်တာ ကျွန်တော်အထက်ကပြောခဲ့တဲ့စစ်ကားကောင်းတွေမှာ မပါခဲ့တဲ့ ရှုထောင့်ကိုရိုက်ပြထားတယ်….အစပိုင်း၁၅မိနစ်လောက်ပဲကြည့်ရသေးတယ် …အဆုံးထိ ကြည့်ဖြစ်သွားသလို အတွေးတွေလည်း တစ်ကိုယ်လုံးထုံလွှမ်းကျန်ခဲ့တယ်… အမေရိကန်စစ်တပ်မှ တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ယောက်ဟာ ရှေ့တန်းမှာ လက်နက်ကြီးထိခဲ့လို့ မျက်လုံး ခြေထောက်တို့မှ ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်.. ဒါကြောင့်သူ့ကို စစ်တပ်ကနေ ပင်စင်ပေးဖို့ ပြုလုပ်ပေးတယ်..မပေးခင်ကာလ (၃)မှာ ပေါ့ပါးတဲ့တာဝန်တစ်ခုကိုခိုင်းလိုက်တယ်….သူလုပ်ရတဲ့အလုပ်မှာ အထက်အရာရှိတစ်ယောက်ရှိတယ်… သူ့အလုပ်က လွယ်ကူလွန်းတယ်လို့ ယူဆတယ်…တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီအလုပ်က သူ့အတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နေတယ်… သို့ပေမယ့် သူထင်သလောက် မလွယ်ကူမှန်း (၃)ခါလောက်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသိလိုက်ရတယ်…ခင်ဗျားတို့လည်း ဇာတ်ကားကြည့်နေရင်း သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်နေရာကို ဝင်ရောက်ခံစားရင်း အဆိုးတကာ့အဆိုးဆုံးစစ်ပြေပြင်ကိုသွားနေသလိုခံစားရလိမ့်မယ်…ဘာအလုပ်ဆိုတာရယ် …ဘယ်လိုတွေ တွေ့ကြုံရမယ်ဆိုတာရယ်တော့ စပွိုင်လာမဖြစ်စေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြောတော့ပါဘူး… သို့ပေမယ့် စစ်ကားကောင်းကြိုက်တဲ့သူတွေအဖို့ ဒီကားကိုကြည့်စေချင်တယ်….ခင်ဗျားတို့အတွက် ရုပ်ရှင်ကားကြည့်ရတာ အချဉ်းနှီးမဖြစ်စေပါ့လားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးရစေတဲ့ ကားစာရင်းထဲမှာ ဒီကားလည်း စာရင်းဝင်သွားလိမ့်မယ်လို့အာမခံတယ်… ဒီကားက ဇာတ်ညွှန်းဆု၊ဇာတ်ပို့ဆုအတွက် အော်စကာဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ခဲ့သလို အခြားဆု(၁၇)ဆုလည်းရရှိခဲ့တယ်…
Director:Bille August ရိုက်ကူးထားပြီး Liu Yifei (ဂူဂူး)လေးပါဝင်ထားတဲ့ Chinese War Drama ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ In Harm’s Way / The Chinese Widow / The Hidden Soldier စသည်ဖြင့် Title မျိုးစုံ ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်က ဂျပန်နဲ့စစ်ဖြစ်နေချိန် (1947)မှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားတယ် တရုတ်မုဆိုးမတယောက်က မိမိတို့နိုင်ငံနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်လူမျိုးစစ်သားတစ်ဦးကို အသက်ဘေးမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်း မေတ္တာသက်ဝင်ခဲ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုပါ ရိုက်ပြထားတယ် တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ သစ္စာစောင့်သိမှုကိုလဲ အသားပေးရိုက်ကူးထားပါတယ် သရုပ်ဆောင်တွေအားလုံးကလည်း သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ အသီးသီးတာဝန်ကျေပါတယ် Soldier Jackနေရာက သရုပ်ဆောင်တဲ့ Emile ရော မုဆိုးမသမီးနေရာက NuNu ရောပီပြင်ကြတယ် အထူးပြောရရင် Liu yifei က မုဆိုးမYingရဲ့ roleကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်ပြသွားတာကို သဘောအကျဆုံးပါပဲ။ ခင်ပွန်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ သမီးနဲ့ယောက္ခမတွေကို ကျွေးမွေးထားရတဲ့ မုဆိုးမလေး… ဒီလောက်တာဝန်ကျေတာကိုတောင် ယောက္ခမဘက်က မိမိသိက္ခာကိုထိပါးလာတဲ့အခါမှာ ခံစားရတဲ့ mood.. နောက်ပြီးမုဆိုးမတစ်ယောက်ရဲ့ နိုင်ငံအပေါ်သစ္စာစောင့်သိမှုနဲ့ မိတ်ဆွေအစစ်ဆိုရင် အသက်ပေးပီးကာကွယ်သွားတယ်ဆိုတာကို ရင်ထဲနင့်နေအောင် သရုပ်ဆောင်ပြနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်လဲ Shanghai international film festival မှာ best actress nomination ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါမယ်။ တခုသေချာတာကတော့ Liu Yifei ပရိတ်သတ် မှန်ရင် ဒီကားကိုမလွဲမသေကြည့်သင့်ပါတယ်လို့ ညွှန်းပါရစေဗျ။
The Captain (2017) ဒီဂျာမန်ကားလေးကတော့ 2017 ကထွက်ရှိလာတဲ့ ကားကောင်းလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rating တွေအနေနဲ့လဲ Imdb Rating 7.4/10 Rotten Tomatoes 86 တောင်ရရှိထားတာပါ။ ဂျာမနီရုပ်ရှင်လောကမှာ Best Feature Film, Best Supporting Actor, Best Score, Best Editing စတဲ့ဆုလေးဆုလောက် ဆန်ကာတင်ဝင်ထားတဲ့ကားလေးပါ။ အဖြူအမည်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ဒီကားလေးဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ပုံရိပ်တစ်ခုကိုပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဖော်ထားသလိုပါပဲ။ စစ်ကားကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအဖို့တော့ တော်တော်လေးအကြိုက်တွေ့မှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အကျဉ်းကိုလဲ တင်ပြပါဦးမယ်။ စစ်ပွဲကြီးပြီးကာနီး နှစ်ပတ်အလိုမှာစစ်ပွဲကနေ စစ်သားတွေအများအပြားထွက်ပြေးကြပါတယ်။ နောက်ကလိုက်ဖမ်းသူတွေ ထွက်ပြေးသူတွေ သုတ်သင်ပစ်သူတွေနဲ့ ငရဲပွက်နေချိန်မှာ တပ်သားလေးတစ်ဦးဟာ ဗိုလ်ကြီး ယူနီဖောင်းတစ်စုံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။ အဲဒီမှာ ဇာတ်လမ်းကစပါတော့တယ်။ဗိုလ်ကြီး ဟာရိုးဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ဗိုလ်ကြီးအယောင်ဆောင်ထားတဲ့ တပ်သားလေးဟာ ဘယ်လိုဆက်ရှင်သန်မလဲ? တပ်ပြေးမှန်းသိရင် ခြွင်းချက်မရှိ သတ်ပစ်မယ့်အခြေအနေတစ်ခုမှာ သူဘာဆက်လုပ်မလဲ? စတဲ့မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှူရမယ့်ကားကောင်းလေးပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖြစ်ရပ်မှန်ကားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် The Captain (2017)ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
(((ဒီကားကို ကျွန်တော်တို့ Channelmyanmar ကနေ ၂၀၁၅ ခုနှစ်လောက်က ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ…
ကားကောင်းလေးလည်းဖြစ်တော့ ဘာသာပြန် Sherlock ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခိုင်းပြီး တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်..နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ဆီမှ မူရင်းဇာတ်ကားကို သွေဖီစေတဲ့စာသားတွေ
မပါအောင်အတတ်နိုင်ဆုံး ဂရုစိုက်နေပါတယ်..လာရောက်အကြံပြုပြောဆိုတဲ့သူတွေကိုရော အားပေးတဲ့သူတွေကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….))))
ဒီဇာတ်ကားလေးက IMDb rating 7.8 အထိရရှိထားပြီး
Drama ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
Action အားပေးနေကြ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်လည်း
ဒီဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါ message တစ်ခုခုချန်ထားပေးခဲ့မယ့်
ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့စိတ်ကိုလည်းသိမြင်နိုင်မယ့် တကယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။
ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျူးလူမျိုးတွေထားတဲ့အကျဉ်းစခန်းကို
သားဖြစ်သူ ရွယ်တူကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ အကျဉ်းစခန်းမှာ
ရန်ဘက်မျိုးနွယ်စုကြီး(၂)စုက အပြစ်မဲ့ကလေး(၂)ယောက်ရဲ့ သံယောဇဉ်ကို ပီပြင်အောင်
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ခိုးစားရတဲ့အသီးဟာ ချိုတယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပဲ
ကလေး(၂)ယောက်ကြားထဲက Forbidden Friendship ကို
Grave of the Fireflies (1988)ဟာဆိုရင်ဖြင့် best animation movie of all timeထဲက တစ်ကားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပြီး. IMDB.Rating အားဖြင့်လည်း အံသြစရာကောင်းလောက်အောင်8.5ထိရရှိထားတဲ့ animeဖြစ်လို့ကြည့်ဖစ်အောင်ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ… .အညွှန်းပေးရမယ်ဆိုရင်တော့…. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန် ဂျပန်နိုင်ငံလည်းနေရာအနှံ့ဗုံးကျဲခံရလို့…ထွက်ပြေးကြရ-ဗုံးကျင်းတွေ ခိုကြရတဲ့အချိန်မှာ…..ဆဲတိုနဲ့ဆဲဆု တို့မောင်နှမ နဲ့ သူတို့အမေလည်း ဗုံးခိုကြရရင်း..သူတို့အမေသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်… အဖေကလည်းတိုက်ပွဲမှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အတွက်. .အဆက်အသွယ်ကလည်းမရဖြစ်နေပြန်တော့. .ခိုကိုးရာမဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်း အမေ့ညီမ တစ်ဝမ်းကွဲ အဒေါ်အိမ်ကိုမှီခိုဖို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်.. ရောက်ခါစကတော့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ဆီကပါလာတဲ့ အစားအသောက်တွေမျက်နှာကြောင့်ကြည်ကြည်ဖြူဖြူဖြစ်ပေမယ့်.. အားလုံးကုန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ညိုငြင်စပြုလာပါတော့တယ်.. ကြံခိုင်တဲ့အကိုဖြစ်ဆဲတို က အပြောအဆိုမခံချင်တာနဲ့မောင်နှမလေးနှစ်ယောက် အမေချန်ထားခဲ့တဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့လမ်းဘေးနေရာ တစ်ခုမှာ စားသောက်ခဲ့ကြတယ်.. ညမှောင်လာတဲ့အခါ ပိုးစုန်းကြူးလေးတွေဖမ်းပြီးအရင်က မိသားစု စုံစုံလင်လင်ရှိချိန်တွေပြန်စဉ်းစားကြတယ်.. တဖြည်းဖြည်းနဲ့စားစရာတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ…. သူတို့ရဲ့အဖေနဲ့ရော ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်မှာလား.. ဒီကားလေးကိုဂျပန်လို အဓိပ္ပါယ်ဆိုရင်”ပိုးစုန်းကြူးတို့ရဲ့ ဝိဉာဉ်” လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်.. ဒီရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကရော ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲဆိုတာ အပြည့်အဝဆက်သိချင်ရင်တော့ ဒီကားလေးကို ဆက်လက်ကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ် ဂျပန်လူမျိုးတို့ရဲ့ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ဆင်းရဲမွဲတေပုံကနေ ခေတ်မှီတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုဖြစ်ရောက်အောင် ဘယ်လိုစိတ်အင်အားတွေကတွန်းပို့ပေးခဲ့လည်းဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားလေးက သရုပ်ဖေါ်ပြပေးနေသလို.. သနားစို့နင့်မှုတွေနဲ့တကွ..လောကဒဏ်ကို ကြံကြံခိုင်တွန်းလှန်စေရဲမဲ့သတ္တိတွေ..စစ်အတွင်းမှာ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝနဲ့အကိုတယောက်က သူ့ညီမလေးအပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာတွေကို ပြည့်ပြည့်၀၀ဖေါ်ကျူးထားတဲ့ Best Animation Movie Of All Time သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဒီဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ ကိုယ်ပါခံစားမိလာပြီး.. မျက်ရည်ကျတဲ့အထိပါပဲ…CM Fan တွေလည်းခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး
စစ်ကားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ။ ဒီကားလေးက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို အခြေပြုပြီးရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့အလှည့်အပြောင်းဖြစ်တဲ့ Normandy ကမ်းခြေ တိုက်ပွဲကို အခြေပြုရိုက်ကူးထားပြီး Normandy ကမ်းခြေကို အမေရိကန်စစ်တပ်တွေ ဝင်သိမ်းတဲ့ ရိုက်ကွက်ကိုလည်း ပီပီပြင်ပြင် ရှုစားရမှာဖြစ်တယ်။ နာမည်ကြီးမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Tom Hanks (Catch me if you can), Matt Damon (Bourne Trilogy), Vin Diesel (Fast & Furious Series) တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ချက်၊ ဇာတ်လမ်း ကပြောစရာမရှိသလို ဒါရိုက်တာကလည်း နာမည်ကြီး Steven Spielberg (Jurassic Park, Catch me if you can) ဖြစ်လိ့ု ပြောစရာမလိုပါဘူး ။အော်စကာဆု ၅ခုကို ဆွတ်ခူးနိူင်ခဲ့သလို တစ်ခြားဆုပေါင်း ၇၀ကျော်ကိုလဲ ရယူနိူင်ခဲ့ပါတယ်။ IMDBမှာလဲ Rating 8.6အထိတောင် ရထားပါတယ် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ စစ်ကားကြိုက်ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ကျေနပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်… ဒီကားအကြောင်းတော်တော်များများကြားဖူး သိဖူးနေလို့ထွေထွေထူးတော့မညွှန်းတော့ပါဘူး …တကယ့် ဂန္တဝင်ကားမို့ အရည်အသွေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ခံစားစေချင်တဲ့အတွက် 1080p5.1chနဲ့ 720p တို့ဖြင့် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးထားပါသည်…
Oba_ The Last Samurai (2011)
စစ်ကားကြိုက်တဲ့နှစ်သူတွေအတွက်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတကားနဲ့တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဂျပန်ပိုင် ဆိုက်ပန်ကျွန်းပေါ်ကအဆုံးသတ် စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်…အရှုံးဆိုတာ လွယ်လွယ်လက်မခံတတ်တဲ့ ဂျပန်တို့ရဲ့ ထုံးစံနဲ့ Emotion ပြင်းထန်တဲ့ Usa တပ်ရင်းမှူးတို့ကြားက အတ္တပြိုင်ပွဲမှာ..ဂျပန်ကပ္ပတိန် က လက်နက်အလွယ်လေး ချမလား.?မိမိနိုင်ငံပိုင်ကျွန်းပေါ်က ဂုဏ်သိက္ခာအရ၂ ဖက်တိုက်နေရတဲ့ စစ်ပွဲကြား အပြစ်မဲ့ဂျပန်ပြည်သူတွေ့ရဲ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ့ကိုဘယ်လို ကာကွယ်ကုသရမလဲ..??အနီးကပ် ကွပ်ကဲ့စောင့်ကြည့်ရတဲ့ Usa ကပ္ပတိန်အသစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှကော့ ဘယ်လိုအဖြေ ထွက်လာမလဲ.?စစ်ရဲ့ အနိဌာအာရုံတွေ့ကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးလေယာဉ်ငယ်ဖြင့် ဗုံးချအနိုင်ယူ၍ ရပါသော်လည်းကျည်ဆံထက် နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များ စားပွဲဝိုင်းမှာအဖြေရှာပြီး လူပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့ အသက်တွေ့ကိုမျိုးရိုးဂုဏ်နိမ့်ပြီး ဆာမူရိုင်းတို့ ဘယ်လိုတုံပြန်မလဲဆိုတာကြည့်ရူရမဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်….ကျတော်တို့ သင်ယူရမဲ့ အခြေခံအချက်တွေ့ ပိုလျှံနေအောင်ညွှန်းပြနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတခုအဖြစ် ဖေါ်ညွှန်းလိုက်ပါတယ်
Laugh or die ဆိုတဲ့ကားလေးကတော့Rating 7.2 ရရှိထားပြီးဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုအပေါ်မှာ ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖင်လန်နိုင်ငံ ပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာ အဖြူတွေအနိုင်ရရှိပြီး အနီတွေအားလုံးကတော့ အကျဉ်းစခန်းများမှာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံကြရပါတယ်။ ပါရီကာဟာ ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့ အတော်ဆုံး ပြဇာတ် ဟာသ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာလည်း ဂျာမန်တွေကိုသတ်တဲ့အမှုနဲ့ သေဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီး အကျဉ်းစခန်းမှာ အဖမ်းခံနေရသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သေဒဏ်ပေးခံရနီးဆဲဆဲမှာ ပါရီကာတို့ အကျဉ်းစခန်းကို အကျဉ်းဦးစီးမှုးချုပ် လာရောက်လည်ပတ်မည်ဆိုသည့်သတင်းကြောင့် ပါရီကာဟာလည်း သေဒဏ်ကိုဆိုင်းငံ့ကာ လူကြီးများအား ပြဇာတ်ဖျော်ဖြေရန် တာဝန်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ အကျဉ်းစခန်းတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးက ပါရီကာအား ကောင်းကောင်းဖျော်ဖြေနိုင်လျှင်သူနှင့်သူ့အဖွဲ့အား သေဒဏ်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမည်ဟု ကမ်းလှမ်းထားခဲ့ပေမယ့် ပါရီကာတို့ရဲ့ ပြဇာတ်က ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ၊ ဗိုလ်မှူးကရော ကတိတည်ပါ့မလား၊ ပါရီကာကရော သေဒဏ်က လွတ်မြောက်သွားမလားဆိုတာတော့ ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာပဲ ကြည့်ရှုအားပေးလိုက်ပြပါဦးနော်…
မိုင်းဆိုတာ စစ်မြေပြင်မှာ ဗျူဟာမြောက်အသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်…သူ့ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စစ်ကြောင်းတစ်ခုကို ရပ်တန့်နှောင့်နှေးစေချင်လို့ပါ..ဥပမာ မိုင်းကွဲတယ် ခြေထောက်ပြတ်တယ် ဒီအခါမှာ သူ့ကို သယ်ဖို့ စစ်သည် (၂)ယောက် လိုမယ်… ဗျူဟာမြောက်သုံးကြတယ်…သေဆုံးနိုင်ခြေနည်းတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်သက်လုံး လူဖြစ်ရှုံးသွား နိုင်ပါတယ်..မိုင်းဖော်တဲ့သူအတွက်လည်းအရမ်းကို အန္တရယ်များပါတယ်..ဒီတွေဘာကြောင့်ပြောပြနေလဲဆိုတော့ ဒီကားထဲမှာ ဂျာမန်တွေဟာဒိန်းမတ်ကိုသိမ်းထားတုန်းမှာ မိုင်းအလုံး (၂) သန်းကျော်ကိုထောင်ထားခဲ့တယ်…ဂျာမန်တွေစစ်ရှုံးသွားလို့ ဒိန်းမတ်မြေက ဆုတ်ခွာ သွားပေမယ့် မိုင်းအလုံးရေ (၂)သန်းကျော်ရှိတဲ့ကွင်းကြီးတော့ကျန်ခဲ့ပါတယ်…ဒီမိုင်းကွင်းကြီးကိုရှင်းဖို့တာဝန်ကြတဲ့သူက ဒိန်းမတ်စစ်တပ်မှ တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦး…ဒီမိုင်းတွေကိုရှင်းဖို့ဆိုပြီ ဂျာမန်စစ်သုံပန်း(၁၄)ယောက်တိတိကို တပ်ကြပ်ကြီးဆီပို့ပေးကြတယ်…မိုင်းရှင်းတုန်း သေသွားလည်း နှမြောစရာမရှိတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့..ဂျာမန်တွေသိမ်းပိုက်စဉ်တုန်းက ဒိန်းမိတ်တွေကို ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ် မိန်းမတွေဆိုလည်းမုဒိန်းကျင့် ဆိုးယုတ်မှုမှန်သမျှ ဒိန်းမတ်တွေခံစားခဲ့ရတယ်…ခုမိုင်းဖော်ရမယ့်အချိန်မှာ ဂျာမန်ကလေးတွေနဲ့ဖော်ရမယ်ဆိုတော့ဒိန်းမတ်တပ်ကြပ်ကြီးအတွက် နာကျဉ်းသမျှတွေ ပုံချပါတော့တယ်..ကလေးတွေလို့မမြင်ဘူး ..ဒိန်းမတ်တွေအပေါ်ရက်စက် ခဲ့တဲ့ ဂျာမန်တွေလို့ပဲမြင်တယ်…အသက်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ လူငယ်လေးတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ပြောဆိုဆက်ဆံတယ်အငတ်ထားတယ် ထမင်းမကျွေး ရေမတိုက် သောက်ချင် ပင်လယ်ကြီး တစ်ခုလုံးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးဂျာမန်တွေ ရက်စက်ခဲ့သမျှ အတိုးချတော့တာပါပဲပြီးတော့ ဒီကလေးတွေကို အိပ်မက် ပေးထားတယ်မင်းတို့ ဒီမိုင်းတွေ ရှင်းလို့ ပြီးသွားရင် အိမ်ပြန်ပို့မယ်ဘာညာပေါ့လူငယ်လေးတွေကတော့ သူတို့ အိမ်ပြန်မယ့်နေ့ရက်တွေကို တွက်ရေရင်းနဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ညီအကိုတွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် မိုင်းပေါက်လို့ပျောက်သွားတာကိုပဲ မျက်ရည်တွေ သွင်သွင်ကျရင်း ကြည့်နေရတော့တာပါပဲမိုင်းတွေကလဲ ဒီတစ်သက်ရှင်းလို့ပြီးပါအုံးမလား ?ရုပ်ရှင် Review ကို Phyo Pyae မှ ရေးပေးထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ၁၉၃၃ခုနှစ် မိုးသည်းညလေးတစ်ညမှာဂယ်ဒါတဲ့ပိုက်ဆံရှိအထက်တန်းလွှာကမိန်းမချောလေးတစ်ယောက်ကမ်းဘရေချ့်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲကိုပြေးဝင်လာရင်းနဲ့ ဂိုက်မယ်လွန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့အခန်းမှာဝင်ပုန်းရင်းကနေဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်ခဲ့တယ်ပဲဆိုရမှာပေါ့ဂယ်ဒါကလှသသလို ကောင်လေးတွေကြားမှာလဲ ရေပန်းစားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းကခပ်ရှုပ်ရှုပ်ရယ် ဒီလိုကောင်မလေးကိုမှ တစ်ညတာသူ့အခန်းထဲမှာပေးနေမိတဲ့ဂိုက်အတွက်ကတော့ကံကောင်းခြင်းတွေပဲသယ်ဆောင်လာလေသလား တခြားကောဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့အဲ့အချိန်တုန်းကတော့မသိနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့လေနောက်ဂယ်ဒါလန်ဒန်ကနေနှစ်အတော်ကြာအောင်ပျောက်သွားပြီးတဲ့နောက်သူရောက်နေတဲ့ပဲရစ်ကိုလာခဲ့ဖို့ဂိုက်ကိုစာပို့လိုက်တဲ့အခါဂိုက်တစ်ယောက်ဂယ်ဒါနောက်ကိုရရာရထားနဲ့ဆွဲပြီးတော့လိုက်သွားပါလေရောပေါ့အဲ့အချိန်မှာ ဂယ်ဒါကအနုပညာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေပြီးတော့သူ့ကိုကူညီပေးနေတဲ့မီယာဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်လဲသူ့ဘေးနားမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်ဂယ်ဒါ ဂိုက် မီယာတို့၃ယောက်ရဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေကိုစစ်နောက်ခံထားပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါဇာတ်လမ်းလေးကတစ်မျိုးလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ် အခုပြောပြထားတာက ဇာတ်လမ်းရဲ့တစ်ဝက်တောင်မရှိသေးပါဘူး Rating6.6 ရထားပီး ဇာတ်ကားနဲပတ်သက်ပီ ဆုတွေလဲရထားတဲ့ ကားလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆုရကားလေးမလို့ကြည့်ရှုသင့်ပါကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားပါရစေ။
နော်ဝယ်မာဝမ်ဆိုတဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းသူ ကသူမသေဆုံးခင် သေတမ်းစာရေးခဲ့ပါတယ်သူ့သေတမ်းစာကိုသူ့အလုပ်ရှင်ရှေ့နေကြီးဆီမှာပဲယုံကြည်စွာအပ်နှံခဲ့ပါတယ် သူမသေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ရှေ့နေကြီးကသူရဲ့ သားသမီးဖြစ်တဲ့ အမွှာမောင်နှမ၂ယောက်ရှေ့မှာပဲဖွင့်ဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်သူရေးခဲ့တဲ့သေတမ်းစာကသူများတွေသေတမ်းစာနဲ့မတူ တမူထူးခြား နေပါတယ်ထူးခြားတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာမှ သမီးဖြစ်သူဂျန်မာဝမ်အတွက်စာအိတ်တစ်အိတ်ပေးပြီး အဖေဖြစ်သူကိုရှာပြီးအဲ့စာအိတ်လေးပေးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့သလို သားဖြစ်သူစီမွန်မာဝမ်ကိုတော့ သူ့ရဲ့နောက်ထပ်အစ်ကိုဖြစ်သူကိုရှာပြီး ပေးဖို့စာအိတ်တစ်အိတ်ပေးခဲ့ပါတယ် သားအမိ၃ယောက်ထဲနေခဲ့ပြီးမှအဖေနဲ့နောက်ထပ်အစ်ကိုလုပ်သူကိုရှာရတော့မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သို့သော်လဲ သင်္ချာပညာရှင် ဂျန်မာဝမ်ကပုစ္ဆာတစ်ခုကိုအရှင်းဆုံးပုံစံထိအဖြေရှာတတ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်မောင်လုပ်သူတားနေတဲ့ကြားက သူ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ အဖေဖြစ်သူကိုရှာပြီးစာအိတ်ပေးဖို့ခရီးစထွက်ပါတော့တယ် အဖေဖြစ်သူကိုရှာဖို့ကအမေရဲ့အတိတ်ကို မလွှဲအသေပြန် တူးဖော်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးသူ့အမေရဲ့အတိတ်တွေကို သူတို့မောင်နှမတွေသိလာရတဲ့အခါမှာတော့..IMDb 8.2/10ရထားတဲ့ ဒီကားလေးကအေးအေးဆေးဆေးဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအကြိုက်ဖြစ်မှာပါ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါရင်ထဲစို့နင့်သလိုလို ခံစားရပါတယ်အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်နဲ့ အာရေဗီဘာသာစကားသုံးထားတဲ့ဒီကားလေးကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားဘာသာစကားသုံးဇာတ်ကားအနေနဲ့ အကယ်ဒမီဆန်ကာတင် စာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်…ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးထားတာကတော့
<p>Hacksaw Ridge နောက်ပိုင်း စစ်ကားကောင်းတွေ မထွက်တာတော့ စစ်ကားကြိုက်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ..သို့ပေမယ့် ဝမ်းသာစရာကောင်းတာ က ဒီဇာတ်ကားဟာ စစ်ကားကောင်းစာရင်းထဲပါသလို အကောင်းဆုံးမင်းသားဆု၊တည်းဖြတ်ဆု၊အသံတည်းဖြတ်ဆုနဲ့ မိတ်ကပ်ဆုလည်းရခဲ့တဲ့အပြင် အခြားဆု(၆)ဆုလည်းဆန်ကာတင်စာရင်းထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်&hellip;. ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးအရောင်းရဆုံးဝတ္တုကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်း
ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်&hellip;..ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၁၉၄၁ ဂျွန်လလောက်တွင် ဖင်လန်နိုင်ငံဟာ နာဇီဂျာမန်နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ရတယ်..ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ရုရှားဆိုဗီယက်တို့ရဲ့ နယ်မြေသိမ်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ အပြင်းအထန်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်..၁၉၃၉ခုနှစ်တုန်းက ဆောင်းတွင်းတိုက်ပွဲမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ကာရီးလီးယားနယ်မြေကို ရုရှားတို့ဟာ ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်ချီတက်ခဲ့ကြပြီးတိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်&hellip;စစ်ပွဲကာလ
အတောအတွင်းမှာ ဖင်လန်ရဲဘော်တွေ စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုအဓိကထားပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ&hellip;ဒီကားက ပေးချင်တဲ့ Message လေးတွေအရမ်းကောင်းတယ်&hellip;ဇာတ်ကားက စဆုံးကို တိုက်ပွဲတွေပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်&hellip;..စစ်ကားကြိုက်သူတွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားလို့ ညွှန်းဆိုပါရစေ&hellip;.</p>
ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ လူတိုင်းကြိုက်မယ်မထင်ပါဘူး။ အရမ်းကြိုက်မယ့်သူတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့တွေ အရမ်းကြိုက်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ မူရင်းဝတ္ထုတွေကို ရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းပါပဲ။ The lord of the rings နဲ့ Hobbit ရုပ်ရှင်တွေကို အများစု သိကြမှာပါ။ အော်စကာတွေ တစ်ပြုံကြီးနဲ့ ဂန္ဓဝင် ရုပ်ရှင်တွေကိုး။ ဒါပေမယ့် မူရင်းဝတ္ထုရဲ့ စာရေးသူကိုတော့ အမာခံဖန်တွေပဲ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ J.R.R.Tolkien ခေါ် ဂျွန် ရော်နယ် ရူအယ် တိုကင်းန်ပါပဲ။ တိုကင်းန်ဟာ လူငယ်ဘဝမှာ သူငယ်ချင်း သုံးယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ စာပေအနုပညာကို စိတ်တူကိုယ်တူလိုက်စားကြတဲ့ လေးယောက်အဖွဲ့ပေါ့။ ဒါကြောင့်လဲ သူ့ရဲ့ဝတ္ထုတွေမှာ လေးယောက်တွဲတွေ လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တာလားပါပဲ။ တိုကင်းန်ဟာ ဘာသာစကားတွေ ဒဏ္ဍာရီတွေဘက်မှာ အရမ်းထူးချွန်တဲ့သူပါ။ သူဟာ ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ ပါဝင်တိုက်ခဲ့ဖူးခဲ့တယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ ဝှက်စာဖြေသူအဖြစ် ပြောင်မြောက်စွာ လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ဘာသာစကား ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တာပါ။ ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူပြုစုခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေ ဘာသာပြန်တွေဟာ အခုထိ တက္ကသိုလ်တွေမှာ လေ့လာနေကြရဆဲပါပဲ။ Lotr နဲ့ Hobbit ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်ရတာ ဇာတ်အိမ်ကျယ်ပြန့်လှပြီလို့ ထင်မိပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဆရာ တိုကင်းန်က ပြုံးပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ ဝတ္ထုတွေထဲမှာ ဇာတ်ကောင်တွေသာမက ဆွေစဉ်မျိုးဆက် သမိုင်းတွေ၊ ပြက္ခဒိန်တွေ၊ သူကိုယ်တိုင်ဆွဲထားတဲ့ မြေပုံတွေ အပြင် ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားတဲ့ ဘာသာစကားအသစ်တွေပါ ပါဝင်ခဲပါတယ်။ အဲဒီဘာသာစကားအတွက်လည်း အဘိဓာန်တွေ ပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲက အကြောင်းအရာတွေဟာ တိုကင်းန်ရဲ့ လက်ရာတွေနဲ့စာရင် အကျဉ်းချုံးလေးသာသာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တိုကင်းန်အပြင် သူသေဆုံးပြီးနောက်မှာ သူ့ရဲ့သား ခရစ္စတိုဖာ တိုကင်းန်ကလည်း သူ့ရဲ့ လက်ရေးမှတ်စုတွေကို ပြန်စုစည်းတည်းဖြတ်ပြီး ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်စာအုပ်တွေ ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် Lotr ဖန်တွေ ဂျေအာအာတိုကင်းန်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက် ဒီရုပ်ရှင်က အရမ်းကို နှစ်သက်ဖို့ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေနဲ့ မရင်းနှီးဘဲတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီး ပျင်းစရာလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ကြိုပြီး သတိပေးပါရစေ။
ဒီဇာတ်လမ်းဟာ စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာပါ။
ဇူလိုင်လ ၁၈ ၁၉၃၆ Salamanca, Castilla and León စတဲ့ စပိန်နိုင်ငံရဲ့ စပိန်စစ်တပ် ဟာ စစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အခြေအနေ မတည်ငြိမ်လို့ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုပြီး သိမ်းလိုက်တာပါ။ အနီရောင်တပ်ဖွဲ့ ပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့တွေက လဲ စပိန်စစ်တပ်ကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ စပိန်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ စာရေးဆရာတစ်ယောက်လည်းဖြစ် တက္ကသိုလ်မှာလည်း ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ မီဂွယ်တအူနာမိုနို က သူ့ကိုယ်တိုင် ကူညီတည်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့ဆိုတာ ကိုသူကိုယ်တိုင်မကြိုက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာကြည့်ပါ။ စပိန်စစ်တပ်ကလဲ လူတွေကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာသတ်ပစ်ကြတယ်။ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းကို spoiler သဘောသက်ရောက်မှာစိုးတာရယ်ကြောင့် အသေးစိတ်ကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ခံစားကြည့်ပါ။
Jarhead: Law of Return (2019)======================IMDb Rating 6.7/10 ထိရရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။#Unicodeဒီဇာတ်ကားကို Poster စကြည့်ခဲ့တုန်းက သာမန်စစ်ကားလောက်ပဲထင်ခဲ့မိတာ။ စဖွင့်ကတည်းကစပြီးတော့ကို action ဆန်ဆန်ရိုက်ကူးမှုတွေနဲ့စထားခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းကို ဇာတ်ရှိန်စမြှင့်ပေးတယ်။ ဖြစ်စဉ်က အဆင့် ၇ ရှိ ဆာဂျင်ဒေ့တောရစ်သူက မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား လီဂျူးနီ အခြေစိုက်စခန်းရဲ့ဒုတိယရေတပ်တပ်ရင်း M-SOIT အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။သူဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့က အစ္စရေးကိုစေလွတ်ပြီး ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်စစ်ဆင်ရေးကိုပါဝင်ရပါတယ်။သွားတာတော့ လေ့ကျင့်ရေးအတွက်ပေမယ့် အစ္စရေးလေတပ်က လေယာဥ◌်မောင်းလေ့ကျင့်ရင်း စီးရီးယားဘက်ကနေဒုံးနဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ချင်းကိုခံရပါတယ်။ အရှေ့ဘက် လေယာဥ◌်မောင်းက တစ်ခါတည်းသေဆုံးပြီးအနောက်ဘက်ကထိုင်တဲ့ မေဂျာဂျက်ဆင်ကတော့ လေယာဥ◌်ထဲကနေ အရေးပေါ်ခလုတ်နှိပ်ပြီးထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းစီးရီးယားအကြမ်းဖက် အရှာဘတ်ကလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကို တောရစ်တို့အဖွဲ့နဲ့အစ္စရေး စစ်တပ်ကအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကယ်တင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်စဥ◌်ကိုကြည့်ရှုရတာဟာ တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ထုတ်မပြောခဲ့တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအပိုင်းတွေအများကြီး အများကြီးကို ဆက်တိုက်ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ကောင်းလွန်းလို့ CMပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တစ်ခုမှာချင်တာက မျက်ရည်လေးတော့ခိုင်အောင်ထားပေါ့ဗျာ
တိုကင်းန်ဟာ ဘာသာစကားတွေ ဒဏ္ဍာရီတွေဘက်မှာ အရမ်းထူးချွန်တဲ့သူပါ။သူဟာ ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ ပါဝင်တိုက်ခဲ့ဖူးခဲ့တယ်။ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ ဝှက်စာဖြေသူအဖြစ် ပြောင်မြောက်စွာ လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ဘာသာစကား ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တာပါ။ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူပြုစုခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေ ဘာသာပြန်တွေဟာ အခုထိ တက္ကသိုလ်တွေမှာ လေ့လာနေကြရဆဲပါပဲ။Lotr နဲ့ Hobbit ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်ရတာ ဇာတ်အိမ်ကျယ်ပြန့်လှပြီလို့ ထင်မိပါသလား။ဒါဆိုရင်တော့ ဆရာ တိုကင်းန်က ပြုံးပါလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ ဝတ္ထုတွေထဲမှာ ဇာတ်ကောင်တွေသာမက ဆွေစဉ်မျိုးဆက် သမိုင်းတွေ၊ ပြက္ခဒိန်တွေ၊ သူကိုယ်တိုင်ဆွဲထားတဲ့ မြေပုံတွေ အပြင် ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားတဲ့ ဘာသာစကားအသစ်တွေပါ ပါဝင်ခဲပါတယ်။အဲဒီဘာသာစကားအတွက်လည်း အဘိဓာန်တွေ ပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ရုပ်ရှင်ထဲက အကြောင်းအရာတွေဟာ တိုကင်းန်ရဲ့ လက်ရာတွေနဲ့စာရင် အကျဉ်းချုံးလေးသာသာပဲ ရှိပါသေးတယ်။တိုကင်းန်အပြင် သူသေဆုံးပြီးနောက်မှာ သူ့ရဲ့သား ခရစ္စတိုဖာ တိုကင်းန်ကလည်း သူ့ရဲ့ လက်ရေးမှတ်စုတွေကို ပြန်စုစည်းတည်းဖြတ်ပြီး ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်စာအုပ်တွေ ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့် Lotr ဖန်တွေ ဂျေအာအာတိုကင်းန်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက် ဒီရုပ်ရှင်က အရမ်းကို နှစ်သက်ဖို့ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေနဲ့ မရင်းနှီးဘဲတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီး ပျင်းစရာလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ကြိုပြီး သတိပေးပါရစေ။
Rotten Tomatoes 89% IMDb 8.3/10 ရရှိထားပြီး အော်စကာ ၁ ဆုနဲ့ အခြားသော ဆုပေါင်း ၁၂၄ ဆုရရှိခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ထွက် ဟစ်တလာ လုပ်ကြံရေး ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားကို CM ပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ အစပိုင်း ပြင်သစ်ကို နာဇီတို့ သိမ်းပိုက်ထားချိန်ကာလ….. နာဇီတွေကို တန်ပြန်သုတ်သင်ဖို့အတွက် မဟာမိတ် တွေဟာ လျှို့ဝှက် တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းဖို့ လက်ဖတင်နင် Aldo Raine (Brad Pitt)ကို တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Aldo ဟာ Basterds လို့ခေါ်တဲ့ ဂျူး ကပြားတွေ အများအပြားပါဝင်တဲ့ တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီး ဟစ်တလာရဲ့ နားရွက်ကို တံတွေးစွတ်ပါတော့တယ်။ Basterds တွေဟာ နာဇီမှန်သမျှရက်ရက်စက်စက်သတ်ပြီး ဦးခေါင်းရေကို ခွါယူလေ့ရှိပါတယ်။သူနဲ့သူ့လူတွေဟာ ဟစ်တလာကို လုပ်ကြံဖို့ ဗြိတိသျှတို့ရဲ့သူလျှို၊ဂျာမန် နာမည်ကြီးမင်းသမီး Bridget von Hammersmark(Diane Kruger)နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ကီနို စစ်ဆင်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ နာဇီတွေ သုတ်သင်ခဲ့တဲ့ ဂျူးမိသားစုတစ်ခုက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ပြီး နာဇီတွေကို လက်စားချေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံပိုင်ရှင် ဂျူး မိန်းမလှလေး Shosanna Dreyfus(Mélanie Laurent) ကလည်း သူ့လက်စားချေမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုကို အမှတ်မထင် ရရှိလာပါတယ်။ဒီလို အခြေအနေမှာပဲ Jews Hunter လို့နာမည်ကြီးပြီး ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲပြီး ဉာဏ်များတတ်တဲ့၊ ကာနယ် Hans Landa (Christoph Waltz) ဟာ ဒီလုပ်ကြံမှုကို ဘယ်လိုမျိုး တားဆီးကာကွယ်မလဲ။ Basterds တွေရဲ့ ကံကြမ္မာနဲ့ ဟစ်တလာရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ ဘယ်သူ့အပေါ်မှာ မူတည်မလဲ? လုပ်ကြံမှုကရော အောင်မြင်မလား…. ကျဆုံးမလား ဆိုတာကို ရင်သပ်ရှုမောနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာပါ။ဒီဇာတ်ကားဟာ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ်နဲ့ ဇာတ်ရုပ်တွေကို အများနဲ့မတူအောင် ခွဲထွက်ရိုက်ကူးတဲ့ နေရာမှာ နာမည်ကျော်တဲ့ အော်စကာဆုအပြင် အခြားဆုတွေအများကြီး ရထားတဲ့ ဒါရိုက်တာ Quentin Tarantino ရဲ့ လက်ရာပါ။ ဇာတ်လမ်း၊ သရုပ်ဆောင်မှု နဲ့ ရိုက်ကူးတင်ပြမှုတွေအရမ်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းမို့ CM ပရိသတ်ကြီး ခံစားကြည့်ရှုကြပါဦးလို့……
ဒီတစ်ခါ ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင် တူရကီ-ကိုးရီးယား ဖက်စပ် ဖြစ်ရပ်မှန်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးပါမယ် ဒီကားက တူရကီ စစ်မှုထမ်းဟောင်း Suleyman Dilbirligi ရဲ့ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားပြီး နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာ ဆုတွေရရှိခဲ့တဲ့ IMDb rating 8.5/10 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကိုးရီးယားစစ်ပွဲကာလမှာ အမေရိကန်အကူအညီနဲ့ တောင်ကိုးရီးယားက တခြားနိုင်ငံတွေကို စစ်ကူတောင်းခဲ့ရာမှာ တူရကီနိုင်ငံကလည်း သူတို့​တပ်ဖွဲ့ကို စေလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ် တူရကီတပ်ဖွဲ့ထဲမှာ စစ်အင်ဂျင်နီယာ တပ်ကြပ် စူလေးမန်း နဲ့ သူ့အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း အလီတို့ ပါဝင်သွားခဲ့ပါတယ် ကိုးရီးယားကိုရောက်ရှိပြီး မကြာခင်မှာ စူလေးမန်းတို့ အဖွဲ့ဟာ ရွာလုံးကျွတ် အသတ်ခံထားရတဲ့နေရာကို ရောက်ရှိသွားပြီး အသက် ငါးနှစ်ဝန်းကျင် မိန်းကလေးငယ်လေး တစ်ယောက်ကို အသက်ရှင်လျက် တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အကြောက်လွန်သွားတဲ့ ကလေးက စကားမပြောနိုင်တော့ပါဘူး ကလေးငယ်လေးကို တွေ့တဲ့နေရာမှာ မထားခဲ့နိုင်တဲ့ စူလေးမန်းဟာ တပ်ထဲကို ခေါ်လာခဲ့ပြီး အိုင်လာလို့ နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ် ကလေးကို အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ ရ​အောင် ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ပေးထားတဲ့ စူလေးမန်းဟာ တစ်နှစ်ပြည့်လို့ တူရကီကို ပြန်ဖို့ အမိန့်ကျလာတဲ့အခါမှာတော့… တပ်ကြပ်စူလေးမန်းရဲ့ စိတ်ထားမြင့်​မြတ်ပုံ တပ်သားတွေ အချင်းချင်း မေတ္တာတရား ကြီးမားပုံ စစ်ပွဲကာလမှာ ပြည်သူတွေ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်တွေ နာကျင်ခံစားရပုံတွေကို ရသအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြည့်ရှုခံစားရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ
War Of The Arrows (2011) ~~~~~~~~~~~~~~ COVID-19ကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းနေကြတဲ့ ချိဖချိမတို့ post ကို မြင်ပြီးတော့ မဖတ်ပဲ ကျော်သွားချင်ကြတာလား😒? ကျော်မသွားနဲ့နော်… ကုလား၅ကောင်ကို အိမ်ပါဆယ်ပို့ပြီး ကခိုင်း လိုက်မှာနော်😂 ဆက်ဖတ်လေ အောက်မှာ ရှိသေးတယ်👇 အခု ဇာတ်ကားလေးကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဂျိုဆွန်းခေတ် ကာလတုန်းက မန်ချူးတို့ ကိုရီးယားကို ဒုတိယအကြိမ် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ Park Hae-il, Ryu Seung-ryong and Moon Chae-won တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်… ဂျိုဆွန်းခေတ် မန်ချူးကို ကျူကျော်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ နမ်ရီဆိုတဲ့ မြှားသမားလေးဟာ မန်ချူးတွေ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားတဲ့ သူ့ညီမငယ်လေး ဂျယ်အင်း ကို ဘယ်လို ကယ်တင်မလဲ? ညီမ‌ငယ်လေးအတွက် ဘယ်လိုအရာတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရမလဲ? နောက်ဆုံးမှာ သူကယ်တင်ချင်တဲ့ ညီမငယ်လေး ရန်သူတွေလက်ထဲကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား? ဆိုတာတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် စောင့်ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ” War of The Arrows”ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ တစ်ကားလုံးမှာ မြှားပစ်တာတွေ အများကြီးပါတာမို့ ငယ်ငယ်က သားရေကွင်းပစ်ပီး စစ်တိုက်တမ်း ကစားခဲ့ကြဖူးတဲ့ ချိဖချိမတို့အတွက် ငယ်စဉ်ဘဝကို ပြန်လည်မြင်ယောင်မိစေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုဖို့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးမလို့ ဆက်ဆက်ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါစေ။
Flags of Our Fathers(2006)IMDb….7.1,,,Rotten…73%“သူတို့အားလုံးကို ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပို့နိုင်စေရမယ်လို့ ကတိပေးထားတယ်….ဆိုလိုတာက တစ်ဝက်လောက်ကိုလိမ်လိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့” ဒီစကားကိုတော့ တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦးက ဂျပန်ကျွန်းဆွယ်ဖြစ်တဲ့ အီဝိုးဂျီဝါးကျွန်းကိုမသိမ်းခင် တပ်ခွဲမှူးအရာရှိကို ပြောနေတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်.။ပြောချင်တာက ဥပမာလူ(၃၀၀)တက်ရင် ၁၅၀သေမယ် ၁၅၀အသက်ရှင်မယ်ပေါ့လေ။..ဒီဂျပန်ကျွန်းတက်သိမ်းမယ့် စစ်ဆင်ရေးမှာ သူကိုယ်တိုင်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ဖို့ ၇၀ရာနှုန်းလောက်သေချာနေပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူထက် လက်အောက်ငယ်သားတွေ အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံပါပဲ….Flags of Our Fathers ဆိုတာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း အီဝိုးဂျီဝါးကျွန်းကိုတက်သိမ်းစဉ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်မှီငြိမ်းဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်…..ဒီကျွန်းကိုတက်မသိမ်းခင် ရေတပ်ကအမြှောက်ကြီးတွေက ဗုံးမိုး ရက်(၂၀)လောက်ရွာခဲ့လို့ မြက်ပင်တောင်မရှိတော့ဘူး….သို့ပေမယ့် ဂျပန်တို့ရဲ မြင့်မြတ်သောကျွန်းအဖြစ်ဦးထိပ်ထားတဲ့ ဒီကျွန်းကိုရဖို့ အမေရိကန်တို့ အရာအားလုံးနီးပါးစတေးခဲ့ရတယ်…ကျွန်တော်ဒါတွေပြောလို့ စပွိုင်လာဖြစ်သွားတယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့…တကယ့်ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကအဖြစ်ဆုံးအကြောင်းအရာကအီဝိုးဂျီဝါးကျွန်းရဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာ စိုက်ထူခဲ့တဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်…ဒီအလံရဲ့နောက်ကွယ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ အကောင်းဆုံးအပိုင်းဖြစ်လို့ ထိန်ချိန်ထားပါရစေ….ဒီကားက စစ်ကားထဲမှာဆို တကယ့် ဂန္တဝင်စားရင်းထဲကိုထည့်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်..ဒါရိုက်တာက Clint Eastwood ကြောင့်လို့လည်းမထင်လိုက်ပါနဲ့…ကျွန်းသိမ်းစဉ်မှာ ကြည်း၊ရေ၊လေ (၃)ခုပေါင်းပြီး ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပုံတွေကို တကယ့်ထိတ်လန့်စရာစစ်မြေပြင်အတိုင်းရိုက်ပြနိုင်သလို စစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေ တိုက်ပွဲဝင်စစ်သည်တွေရဲ့ ခံစားချက်အဖုံဖုံ ခံယူချက်အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းရိုက်ပြနိုင်ခဲ့တယ်…ဒါ့အပြင် အစိုးရပိုင်း ပြည်သူနဲ့ စစ်သည်တွေကြားရဲ့ ဆက်နွယ်မှုတွေကိုလည်း ခင်ဗျားတို့မြင်ရလိမ့်မယ်…ဒီကားက အော်စကာ ဆန်ကာတင်(၂)ဆုစာရင်းဝင်ခဲ့သလို အခြားဆု(၁၅)ဆုလည်းရရှိခဲ့တယ်…ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး Clint Eastwood ကတော့ AARPက ချီးမြင့်တဲ့အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုရရှိခဲ့တယ်..ကိုင်း စစ်ကားကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးစာရင်းဝင် တစ်ကားတင်ဆက်လိုက်ပါပြီ…ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…
Unknown Soldier(2017) IMDb….7.9(Blu-Ray( 1080p 5.1 CH, 720p) တို့ဖြင့်တင်ဆက်ထားပါသည်…)Hacksaw Ridge နောက်ပိုင်း စစ်ကားကောင်းတွေ မထွက်တာတော့ စစ်ကားကြိုက်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ..သို့ပေမယ့် ဝမ်းသာစရာကောင်းတာ က ဒီဇာတ်ကားဟာ စစ်ကားကောင်းစာရင်းထဲပါသလို အကောင်းဆုံးမင်းသားဆု၊တည်းဖြတ်ဆု၊အသံတည်းဖြတ်ဆုနဲ့ မိတ်ကပ်ဆု လည်းရခဲ့တဲ့အပြင် အခြားဆု(၆)ဆုလည်းဆန်ကာတင်စာရင်းထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်….ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးအရောင်းရဆုံးဝတ္တုကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်…..ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၁၉၄၁ ဂျွန်လလောက်တွင် ဖင်လန်နိုင်ငံဟာ နာဇီဂျာမန်နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ရတယ်..ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ရုရှားဆိုဗီယက်တို့ရဲ့ နယ်မြေသိမ်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ အပြင်းအထန်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်..၁၉၃၉ခုနှစ်တုန်းက ဆောင်းတွင်းတိုက်ပွဲမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ကာရီးလီးယားနယ်မြေကို ရုရှားတို့ဟာ ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်ချီတက်ခဲ့ကြပြီးတိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…စစ်ပွဲကာလ အတောအတွင်းမှာ ဖင်လန်ရဲဘော်တွေ စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုအဓိကထားပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ…ဒီကားက ပေးချင်တဲ့ Message လေးတွေအရမ်းကောင်းတယ်…ဇာတ်ကားက စဆုံးကို တိုက်ပွဲတွေပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်…..စစ်ကားကြိုက်သူတွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားလို့ ညွှန်းဆိုပါရစေ…
မင်းသားKwon Sang-wooနဲ့ bigbangထဲမှ မင်းသား Choi Seunghyun တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး IMD ratting 7.4 အထိရရှိထားတဲ့ စစ်ကားတကားဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ကိုရီးယား စစ်ပွဲအတွင်း ၁၉၅၀ သြဂုတ် ၁၁ ရက်နေ့ ပိုဟန်တိုက်ပွဲ မှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ လက်နက်မဲ့ပြီ လေ့ကျင့်မှု မရှိသေးတဲ့ ကျောင်းသား ၇၁ ယောက်ရဲ့ အကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်ကို တည်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါတစ်ခါမှ သေနတ်မကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျောင်းသား ၇၁ ယောက်ဟာ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး တပ်ရင်း ၇၆၆ ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ၁၁ နာရီ ကြာ တောင့်ခံထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်မြောက် ဂျောင်ဆန်းခရိုင် ယောင်ဒွတ်နယ် ဘက်က လုပ်အားပေး စစ်သားလေးအိုဂျောင်ဘွန် ..သူဟာ ဒဏ်ရာရ စစ်သားတွေကို သယ်ပိုးပေးရ အကူအညီပေးရတဲ့ နေရာမှာ ချထားပေးခံရတယ်မြောက်ကိုရီးယားဘက်က မြို့ကိုသိမ်းပြီးတဲ့အခါ ဗိုလ်မှူး ကင်ဂျွန်ဆု က ခေါ်လာခဲ့ပြီး အဆောက်အဦး တစ်ခုထဲမှာ သူတို့နဲ့အတူ ပုန်းခိုစေခဲ့ပါတယ် သူတို့ဟာ မြောက်ကိုရီးယားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တောင်ကြားလမ်းကနေပြေးလာခဲ့ကြတယ် နောက်ဆုံး မြောက်ကိုရီးယား စစ်သား တစ်ယောက်နဲ့ ကင်ဂျန်းဘုန်း ပဲ ကျန်ခဲ့တော့တယ် တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ဂျောင်ဘွန်ကို ကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးက သူ့အစား သေနတ်နဲ့ ပစ်ခံလိုက်ရတယ် ရန်သူကို သေနတ်နဲ့ ပြန်ပစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ ကြောက်စိတ်ကြောင့် ပြန်မပစ်ရဲခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်နေခဲ့တဲ့ ဂျောင်ဘွန်…မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ကို ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ခုခံခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား ၇၁ ယောက်နဲ့ စစ်ပွဲမှာ သူတို့တွေ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတော့ ဆက်ပြီးကြည့်ကြပါနော် ..
စစ်ကားကြိုက်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီကားက တကယ့် ဂန္တဝင်ကားလို့တောင်ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်… အာဂူးဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်…ကလေးအရွယ်ပဲရှိတဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့စိတ်မှာ ဆော့လိုက် ပျော်လိုက်နောက်လိုက်ပေါ့….သို့ပေမယ့် အာဂူးတို့နေတဲ့ အာဖရိက မှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတယ်… ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ပြည်သူတွေက ဒုက္ခသည် အဖြစ်နဲ့ အရေအတွက်အပေါင်းများစွာတည်ရှိနေတယ်….ကလေးဘဝအာဂူးလေးရဲ့ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကမ္ဘာဟာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြောင့် အဖေနဲ့ အစ်ကို သေဆုံးခဲ့ပြီးအမေနဲ့ ညီမလေးကလည်း ဘယ်ဆီသို့ပေါက်ရောက်မှန်းမသိ….အာဂူးလေးကိုယ်တိုင်လည်း တောထဲထွက်ပြေးရင်း အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ စစ်သည်တော်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်….ဒီကားက တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေပြုရိုက်ကူးထားတာပါ…ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးကြောင့် ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲပုံတွေကိုအကောင်းမွန်ဆုံးရိုက်ပြထားတာ…အကုန်လုံးနီးပါးက အသက်(၁၈)နှစ်အောက်တွေဖြစ်တဲ့အပြင် တစ်ချို့တွေဆို တော်တော်ကြီးကိုငယ်တယ်…သို့ပေမယ့် ရန်သူတစ်ယောက်ရဲ့လည်ပင်းကိုလှီးဖို့ဝန်မလေးသလိုသူပုန်အားပေးအရပ်သားလို့ယူဆတဲ့မိန်းမတွေ၊ကလေးတွေကိုလည်း အေးစက်စက်မျက်လုံးနဲ့ နဖူးကိုသေနတ်နဲ့တေ့ပြီးမောင်းဖြုတ်ဖို့ လည်း ဝန်မလေးကြပါဘူး…စစ်ကားကြိုက်တဲ့သူမဟုတ်ရင်တောင် ဒီကားကို ကြည့်စေချင်တယ်….ဘာလို့ဆို ကျွန်တော့်တို့ဆီမှာလည်း ပြည်တွင်းစစ်တွေ ခဏ ခဏဖြစ်နေတာကိုး..တစ်ခုခုတော့ ခင်ဗျားတို့ ရသွားနိုင်ကောင်းပါရဲ့…
IMDb rating 7.7 ရရှိထားြပြီး မင်းသာကြီး တွမ်ခရု ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဆာမူရိုင်းကားလေးတစ်ကားကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားဟာ အော်စကာအတွက် ဆု၄ဆု ဇကာတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ြပြီး တခြား ရုပ်ရှင်ဆုပေါင်း 19 ဆုနဲ့ ဇကာတင်စာရင်း 54 ခါတိတိ ဝင်ခဲ့ပါတယ်ကဲဗျာ လေတောင်တော်တော်များသွားဘီ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးဖက်ကိုသွာကြရအောင်ဗျာအမေရိကန်စစ်တပ်က ကပ္ပတိန် နာသန်ဟာ ဂျပန်အင်ပါယာ ခေတ်သစ်တပ်မတော်အတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့ ငှားရမ်းခြင်းခံရသူပါ ဒီလိုနဲ့ ဂျပန်ဘုရင်တွေဟာ ရှေးဟောင်း ဆာမူရိုင်း တွေနဲ့ သဘောထားခြင်းကွဲလွဲရာမှ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ တိုက်ပွဲဖြကြရင်း ကပ္ပတိန် နာသန်ဟာ ဆာမူရိုင်းတွေရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရာမှ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်ကြမယ် ဆိုတာကို ပရိတ်သတ်ကြီးက ဆက်ကြည့်ရှူရမှာပါဒီဇာတ်ကားလေးမှာဆို လူတွေရဲ့ လောဘမောဟ ဒေါသတွေအပြင် မေတ္တာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပါပုံဖော်ရိုက်ကူးပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း…….ဗမာပြည်တစ်နေရာတွင် အခြေစိုက်ထားသော ဂျပန်စစ်အကျဉ်းစခန်းတစ်ခုသို့ British စစ်သုံ့ပန်းတစ်အုပ်စုတို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဂျပန်စစ်အကျဉ်းစခန်းကိုဦးစီးသူက Colonel Saito။ British စစ်သုံ့ပန်းများကို ဦးစီးလာသူက Colonel Nicholson။ Colonel Nicholson နှင့်တပ်သားများသည် အကျဉ်းစခန်းသို့စဝင်လာကတည်းက စစ်ချီတေးတစ်ခုကို သံပြိုင်လေချွန်၍ဝင်လာကြသည်။ ဒါဟာ Colonel Nicholson ဘယ်လောက်အထိ Formality, Discipline ကိုအရေးပေးသလဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေသည်။ Nicholson သည် သည်အကျဉ်းစခန်းမှာ ရောက်ရှိနှင့်ပြီးသော Commander Shears အပါအဝင် အခြားသုံ့ပန်းများအတွက်တော့ အထူးအဆန်းပြုံးချင်စရာဖြစ်နေခဲ့၏။ သူတို့ရောက်နေသည့် နေရာ၊ လုပ်ရမည့်အလုပ်တွေက ဒါမျိုးတွေနှင့်မှ မသက်ဆိုင်တာကိုး။ Commander Shears ဆိုသူက အမေရိကန်စစ်တပ်ကဖြစ်သည်။ သူက ပထမဆုံးရက်ကတည်းက Nicholson တို့ကို သည်စခန်းကြီး၏ ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအကြောင်း သတိပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်။ သည်စခန်းမှာ ခြံစည်းရိုးခတ်စရာမလို၊ ကင်းတဲချစရာမလို။ တောအထပ်ထပ်၊ တောင်အစွယ်စွယ်ကာရံထားခြင်းက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ကို အကောင်းဆုံးတားမြစ်ထား၏။ Shears ကတော့ ထွက်ပြေးရန် အချိန်အခါကောင်းနှင့် အဖော်ကောင်းတို့ကိုစောင့်နေသူဖြစ်သည်။ ထွက်ပြေးလျှင် လွတ်မြောက်ရန်ရာခိုင်နှုန်း ၁ ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိသည်ဆိုဦးတော့ သည်စခန်းမှာ ဆက်နေလျှင် ရှင်သန်လွတ်မြောက်နိုင်မည့် သုည ရာခိုင်နှုန်းထက်တော့များသေးသည်ဟု သူကဆိုသည်။ Nicholson ကတော့ သဘောမတူ။ သည်စခန်းမှာပဲ ကျိုးနွံစွာနေပြီး British စစ်သားကောင်းတို့၏ ဂုဏ်ရည်ကိုပြသမည်ဟု ကြုံးဝါးသည်။ပြဿနာက နောက်တစ်ရက်မှာ စသည်။ သည်စခန်းရှိ စစ်သုံ့ပန်းများ၏ တာဝန်က ဗမာနှင့် ထိုင်းကိုဆက်သွယ်မည့် သေမင်းတမန်ရထားလမ်းကြီး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Kwai မြစ်ကိုဖြတ်ကျော်ကာ တံတားတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်၏။ သည်တံတားကြီးက ဂျပန်တို့ကို စစ်ရေးအရ ကောင်းကျိုးအများကြီးပြုမည်ဖြစ်သည်။ Colonel Saito က စစ်သုံ့ပန်းအားလုံးကို အလုပ်ကြမ်းလုပ်စေဖို့ အမိန့်ပေးရာ Nicholson က Geneva convention အရ စစ်အရာရှိများကို အလုပ်ကြမ်းစေခိုင်းပိုင်ခွင့်မရှိဟု စောဒကတက်ပါတော့သည်။ ရလဒ်အနေနှင့် Saito က Nicholson ထုတ်ပြသော Geneva convention စာအုပ်ကြီးနှင့် သူ့ကိုပါးချလိုက်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ရန်ငြင်းဆန်သော Nicholson နှင့် အရာရှိ ၇ ယောက်ခန့်တို့ကိုလည်း နေပူထဲ တစ်နေကုန်မတ်တပ်ရပ်စေခဲ့ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့မှာလည်း ဆက်လက်ငြင်းဆန်နေခဲ့သော Nicholson တို့ကို iron box ဟုခေါ်သည့် သွပ်ကာ တဲကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ ပိတ်လှောင်ထားလိုက်၏။ထိုကိစ္စများဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် Shears သည် အဖော်နှစ်ယောက်တို့နှင့်အတူ အကျဉ်းစခန်းမှ ထွက်ပြေးခဲ့ပါသည်။ အဖော်နှစ်ယောက်သေဆုံးသွားပေမယ့် Shears ကတော့ ခက်ခက်ခဲခဲနှင့်လွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ခေါင်းဆောင်မပါသော British စစ်သားများ၏ ကရော်ကမယ်၊ လျော့တိလျော့ရဲအလုပ်လုပ်ပုံတွေကြောင့် တံတားကြီးက တိုးတက်မှုအလွန်နှေးကွေးနေခဲ့ရပါသည်။ ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာများ၏ မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လည်း ပါပါသည်။ တံတားကြီးသာ အချိန်မီမပြီးခဲ့လျှင် Saito အနေဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်ရမည်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် Saito အနေဖြင့် Nicholson ကိုစိတ်ဓာတ်ပိုင်းအရ အနိုင်ပေးလိုက်ရပြီး အပြစ်ပေးခံထားရသော British officers များကိုလွတ်ပေးလိုက်ရပါတော့သည်။ Nicholson ကလည်း သည်တံတားကြီးကို အပြီးတည်ဆောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် british စစ်သားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ စိတ်ဓာတ်မာကြောမှုတို့ကို သိစေမည်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်တည်ဆောက်ပေးဖို့ သဘောတူလိုက်သည်။ ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာများရွေးချယ်ထားခဲ့သောနေရာက မြေပျော့သောကြောင့် တံတားထောက်တိုင်တွေကိုခိုင်မြဲစေမှာမဟုတ်သည့်အတွက် Nicholson က အခြားတစ်နေရာတွင် တံတားကိုအစအဆုံးပြန်ဆောက်ရမည်ဟုဆိုသည်။ ဘာမှမကြံတတ်တော့သော Saito လည်း သဘောတူလိုက်ရုံမှတပါး………..Shears က အကျဉ်းစခန်းမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာပြီးသည့်နောက် မိခင်တပ်ဆီလည်းမပြန်ဘဲ အေးဆေးအနားယူနေခဲ့သည်။ သို့သော်…..British စစ်တပ်က ဂျပန်တို့၏ စစ်ရေးအချက်အခြာဖြစ်သော Kwai မြစ်ပေါ်ကတံတားကြီးကို ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Shears အား သူခက်ခက်ခဲခဲလွတ်မြောက်လာပြီးသည့် ငရဲခံတွင်းဝအတွင်း နောက်တစ်ကြိမ်သက်ဆင်းရန် အကူအညီတောင်းခံလာခဲ့သည့်အခါ……………….David Lean ဆိုတာ ရုပ်ရှင်လောကတစ်ခုလုံးက လေးစားဦးညွှတ်ကြရတဲ့ ဂန္တဝင်ဒါရိုက်တာကြီးပါပဲ။ သူရဲ့လက်ရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာလည်း ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ကိုကြီးကျယ်ခန်းနားတဲ့ setting ကြီးတွေဆောက်(ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့ တကယ့်တံတားကြီးကိုဆောက်ခဲ့ပါတယ်။)၊ လူအင်အားများစွာသုံးခဲ့တဲ့ဒီဇာတ်ကားကြီးဟာ Best picture, best director, best actor တို့အပါအဝင် အော်စကာ ၇ ဆုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ်တော့ William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, Sessue Hayakawa တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီကားရိုက်ကူးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ခဲ့ရတာလေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီကားဟာ ပြင်သစ်ဝတ္ထုတစ်ခုကိုအခြေခံတာပါ။ သေမင်းတမန်ရထားလမ်းစတဲ့ မှန်ကန်တဲ့ historical facts တွေအပေါ်အခြေခံခဲ့ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းကတော့ စိတ်ကူးယဉ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သေမင်းတမန်ရထားလမ်းလို့ဘာကြောင့်အမည်တွင်သလဲဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ သည်ရထားလမ်းကြီးဖောက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် စစ်သုံ့ပန်း 13000 ကျော်၊ ပြည်သူ 80000 နဲ့ 100000 ကြားသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကားထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေဟာ အပြင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာထက် လျော့နေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။British မင်းသား Alec Guiness အပါအဝင် တော်တော်များများကတော့ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဇာတ်ညွှန်းဟာ Britain တွေကိုချိုးနှိမ်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါ့အတွက် Alec Guiness နဲ့ David Lean တို့ဟာ ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ မကြာခဏ ကတောက်ကဆဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးသွားတော့လည်း သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအော်စကာရခဲ့ကြတာပါပဲ။ ဒီငြင်းခုန်မှုအတွက်တာဝန်ရှိတာကတော့ Colonel Nicholson နဲ့ Commander Shears ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေပါပဲ။ သူတို့ကိုယ်စီကို ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့မြင်လိုက်ကြတဲ့အခါ အငြင်းပွာစရာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ Individual အနေနဲ့ပဲမြင်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာပြောစမှတ်တွင်တာတစ်ခုက အကျဉ်းစခန်းကိုဝင်လာကြတဲ့စစ်သားများ စစ်ချီလေချွန်သံပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ Iron Box ထဲမှာအပြစ်ပေးခံထားတာကနေ ထွက်လာပြီး Colonel Saito ရဲ့တဲဆီကို သွားတဲ့ Nicholson ရဲ့လမ်းလျှောက်ပုံပါပဲ။ တစ်နေကုန် ပူလောင်ပြင်းပြမှုကိုခံထားရတဲ့ Nicholson ရဲ့နွမ်းလျတဲ့လမ်းလျှောက်ပုံဟာ ပီပြင်လွန်းလို့ အားလုံးကချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ Alec Guiness ကဒီလမ်းလျှောက်ပုံကို Polio ရောဂါကနေ နာလန်ထစ သူ့သားရဲ့လမ်းလျှောက်ပုံကိုကြည့်ပြီးသင်ယူခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။Producers, director တွေကိုခေါင်းနားပန်းကြီးစေခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့ လေယာဉ်နဲ့တင်ပို့လိုက်တဲ့ ဖလင်လိပ်တွေ လမ်းမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ခြင်းပါပဲ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုသူတို့ပိုက်စိပ်တိုက်ရှာခဲ့ပြီး တစ်ပတ်အကြာမှာတော့ Cairo လေဆိပ်မှာပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ငွေကြေးများစွာ၊ အချိန်များစွာ၊ ခက်ခဲဆင်းရဲမှုများစွာရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ ဒီ ဖလင်တွေသာပျောက်သွားခဲ့ရင် မတွေးဝံ့စရာပါပဲ။ဒီဇာတ်ကားကြီးဟာ ရုပ်ရှင်တစ်ကားရဲ့ ကြီးကျယ်ခန်းနားမှုတွေကို ဖမ်းဆုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ကြီးမားတဲ့အားပြိုင်မှုတွေကိုပါပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ character တွေဟာ အကုန်လုံးမှန်ကန်တဲ့သူမပါသလို၊ အကုန်လုံးမှားယွင်းနေတဲ့သူလည်းမပါပါဘူး။ အားလုံးကသူ့အမြင်နဲ့သူမှန်နေတော့ ဘယ်သူကသူရဲကောင်း၊ ဘယ်သူကဗီလိန် ခွဲပြောရခက်ပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး ဖက်ဆစ် Colonel Saito ကိုတောင်မှ တာဝန်သိတတ်တဲ့သူအဖြစ်မြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Colonel Nicholson ဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသသူ၊ စည်းကမ်းသေဝပ်သူ၊ ကျင့်ဝတ်လိုက်နာသူလို့ ယေဘုယျရှုမြင်နိုင်ပေမယ့် သေသေချာချာကြည့်လိုက်ရင်တော့ အတ္တ၊ မောဟ၊ ခေါင်းမာမှုတွေအနည်းငယ်ရောစွက်နေတဲ့ စရိုက်ကိုမြင်ရပါမယ်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာ မရှိသင့်တာတွေပါ။ Shears ကတော့ typical American hero ပုံစံပါပဲ။ မလိုအပ်ဘဲ မစွန့်စားဘူး။ မိုက်ရူးရဲမဆန်ဘူး။ Flexible ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်အတွက်အသာရမယ့်နည်းလမ်းကိုတွက်ချက်တတ်တယ်။ ယေဘုယျကြည့်ရင်တော့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူလို့ထင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အရေးကြုံလာတဲ့အခါ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ဖို့လည်းဝန်မလေးဘူး။ ဇာတ်ညွှန်းက Britain တွေကိုနှိမ်တယ်ဆိုတာ မမှန်ရင်တောင် American တွေကိုနည်းနည်း အလေးပေးထားတယ်လို့တော့ ထင်လို့ရပါတယ်။Nicholson, Shears, Saito………..သူတို့က သူရဲကောင်းတွေလား၊ ဗီလိန်တွေလား? Kwai မြစ်ပေါ်ကတံတားကြီးကရော……..အောင်မြင်မှုပြယုဂ်လား၊ စစ်ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလား?~Miller~P.S. ဇာတ်ကားအသစ်တွေ ဘယ်လိုဆန်းသစ်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပဲ ထွက်ရှိလာလာ ကြီးကျယ်ခန်းနားတဲ့ ဂန္တဝင်ရုပ်ရှင်ကြီးတွေဟာ ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ အမြဲထင်ပေါ်နေမှာပါ။ မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်း အဟောင်းထဲကအကောင်းတွေကိုပြန်လည်ခံစားနိုင်စေဖို့ ကြည့်ဖူးတဲ့ ဂန္တဝင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို အလျဉ်းသင့်သလို ပြန်ပြီး review လုပ်ပေးသွားပါမယ်။
စစ်ပွဲနောက်ခံ အက်ရှင်ဇာတ်ကားသစ် Wolf Warriors II သည် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း၌ ရုံဝင်ငွေအများဆုံး ရရှိသော ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်လာပြီး ရုံတင်ပြသခဲ့သည့် ၁၂ရက်အတွင်း ယွမ်ငွေ ၃.၄၄ ဘီလျံ (ဒေါ်လာ ၅၀၆ သန်း) ခန့် ရရှိခဲ့သောကြောင့် အအောင်မြင်ဆုံး ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်လာသည်။အဆိုပါဇာတ်ကားကို မင်းသားဝူကျင်းက ဒါရိုက်တာအနေနှင့်ရော ခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေဖြင့်ပါ ဦးဆောင် ရိုက်ကူးထားပြီး သူနှင့်အတူ အခြားသရုပ်ဆောင် ကြယ်ပွင့်များဖြစ်ကြသော ဖရန့်ခ်ဂရီလို၊ ဆယ်လီနာဂျိတ်၊ ဝူဂန်းနှင့် ကျန်ဟန်တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြသည်။ထိုရုပ်ရှင်သည် အာဖရိကန်စစ်ပွဲဇုံအတွင်းသို့ အမှတ်မထင်ရောက်ရှိသွားသော တရုတ်စစ်သားများ အနေဖြင့် လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်ရပုံအား ဇာတ်အိမ်တည်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။Wolf Warriors II ကို လွန်ခဲ့သောဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့က စတင်ပြသခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရုံဝင်ငွေဇယားတွင် ထိုနေ့ကတည်းက ထိပ်ဆုံးမှဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် ယနေ့အချိန်ထိ ရရှိခဲ့သော ရုံဝင်ငွေမှတ်တမ်းများ အရ ထိုဇာတ်ကားသည် ပြီးခဲ့သောနှစ်က ရုံဝင်ငွေ ၃.၃၉ ဘီလျံယွမ် ရရှိခဲ့ကာ အအောင်မြင်ဆုံး တရုတ် ဇာတ်ကားဖြစ်ခဲ့သည့် The Mermaid နှင့် ၂.၅၇ ဘီလျံယွမ် ရရှိခဲ့သော Furious 8 တို့ကို ကျော်ဖြတ်ကာ သရဖူဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
Old but Gold ကားကောင်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ တကယ့်ကို ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။Imdb rating လည်း 8/10တောင် ရရှိထားတဲ့ ကားလးတစ်ကားပါ။
ဟီရိုရှီးမားဗုံးကြဲခံရတဲ့ကိစ္စလို့ပြောလိုက်ရင် မသိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။
ဟုတ်ပါတယ် ဒီကားကတော့ 1945 ခုနှစ်က ဟီရိုရှီးမား ဗုံးကြဲခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို အခြေခံရိုက်ထားတဲ့ ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားမှာတော့ သနားစရာ မိသားစုအကြောင်းကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
အဲ့ဒီ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ဘဝကို ထင်ဟပ်ပြထားတာမို့ အရမ်းဝမ်းနည်းစရာ မြင်ကွင်းတွေကိုပါ တွေ့မြင်ခံစားရမှာပါ။
ဇာတ်လမ်းကတော့ ဆင်းရဲသား မိသားစု5ယောက်ရဲ့ ဘဝကို အဓိက ရိုက်ကူးထားတာပါ။ မိသားစု5ယောက်ဆိုပေမယ့် မိခင်ဖြစ်သူက ကိုယ်ဝန်မိခင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဟီရိုရှီးမား ဗုံးကြဲခံထိတော့ ဖခင်ရယ်၊ သားသမီး နှစ်ယောက်က သေဆုံးသွားကြတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ ဂျန်ပဲ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
သားအမိနှစ်ယောက် ဗုံးကြဲခံထိထားတဲ့ မြို့မှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကို ကြုံရမလဲ၊ သူတို့သားအမိ ရင်ဆိုင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ဝမ်းနည်းဖွယ် မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ထိုစစ်ကာလမှာ သူတို့မိသားစုလိုပဲ တခြားသော မိသားစုပေါင်းများစွာကလည်း စစ်ဒဏ်၊ဗုံးရဲ့ ဒဏ်ကို အလူးအလိမ့်ခံစားခဲ့ရမယ်ဆိုတာ မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။
စိတ် မကောင်းဖြစ်မိတာ အမှန်ပါ။
မျက်ရည်မခိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ရှူးလေးဆောင်ထားနော်။ တကယ့်ကို ကားကောင်းလေးဖြစ်တာမို့ သူငယ်ချင်းတွေ များများမြင်အောင် Like and share လေး လုပ်ပေးပါနော်။
ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားလေးကတော့ စစ်ကြီးအတွင်းမှာ ဂျာမနီတို့ရဲ့ စစ်သုံ့ပန်းများအဖြစ်အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ လူတစ်စုရဲ့ လွှတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားကြပုံကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကားလေးပါ။
ဒန်နီတို့ လူတစ်စုဟာ စစ်ပွဲအတွင်း နာဇီတွေရဲ့ စစ်သုံ့ပန်းဖြစ်နေတဲ့ဗြိတိန်စစ်သည်တွေပါ။ သူတို့ကို ဂျာမနီကို မခေါ်သွားခင် ပြင်သစ်မှာပဲ စတည်းချနေကြတာပါ။
ဒန်နီဟာ လက်ဝှေ့သမားဟောင်းဖြစ်ပြီး ဂျာမာန်ဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့ မျက်မုန်းကျိုးခြင်းကို ခံနေရသူပါ။အဖွဲ့သားတွေ သက်သာစွာနေနိုင်ဖို့ သူ့ကိုလက်ဝှေ့ထိုးသတ်ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ မလုပ်ချင်ပေမယ့် အားတင်းပြီး လုပ်နေရတာပါပဲ။
သူ့အကြံကတော့ ဂျာမနီကို ခေါ်သွားခြင်း မခံရခင် ပြင်သစ်တို့မြေမှာ ရှိတုန်း၊ အစောင့်အကြပ်နည်းပါးတုန်း အမိမြေဆီ ထွက်ပြေးဖို့ပါပဲ။ သူတစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အပေါင်းအပါတွေနဲ့ အတူပါ။
ဒီလိုနဲ့ စခန်းထဲက နှိမ့်ချဆက်ဆံမှုတွေကို သည်းခံပြီး ထွက်ပြေးဖို့ လမ်းစရှာနေတဲ့ သူတို့လူတစ်စုဟာ တကယ်ပဲ လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ အရသာကို ပြန်ခံစားနိုင်ပါ့မလား။ အဆုံးထိ တစ်ယောက်မကျန် ခေါ်သွားချင်တဲ့ ဒန်နီရဲ့ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပြီး အမိမြေရဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ လေကို ပြန်လည် ရှူရှိုက်ခွင့် ရပါဦးမလား ဆိုတာကိုတော့ ဒီကားလေးကို ဆက်လက်ကြည့်ရှူပေးကြပါဦး။
အဲ့ဒီလူရဲ့ အဓိကနေရာဖြစ်တဲ့ နှလုံးသား အလယ်ဗဟိုတည့်တည့် ချိန်ရွယ်ပစ်ခပ်သိမ်းပိုက်ဖို့လိုပါတယ်…
ဒီလိုပဲ စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာဆိုလည်း အောင်မြင်ရေးသော့ချက်ဖြစ်တဲ့ အဓိက
အချက်အချာမြေကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်…
အဲ့လေဆိပ်ကိုဘာလို့တိုက်ရလဲဆိုတော့ အထက်ကပြောခဲ့သလို အချက်အချာမြေနေရာဖြစ်နေလို့ပါပဲ…
ဒါ့ကြောင့် ယူကရိန်းတို့ ဒီလေဆိပ်မကျသွားဖို့အရေးကို
စစ်သည်အပေါင်းတို့ဟာ တတ်စွမ်းသမျှ အတတ်နိုင်ဆုံးခုခံဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်…
စစ်ကားကောင်းကြိုက်သူတို့ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း ညွှန်းဆိုပါရစေ…
ဒီကားကတော့ ယူကရိန်းစစ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီးပြီးတော့ အောင်မြင်မှုတွေလည်းရသလို
IMDb မှာဆိုလည်း 8.3တောင်ရထားလေတော့ ထွေထွေထူးထူးတော့ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး…ခံစားကြည့်လိုက်ဦးဗျို့…
စစ်ကားကောင်းကြိုက်သူတို့ ရုရှားစစ်ကားသစ်တစ်ကားကို BLU-Ray1080p5.1chတို့ဖြင့်
ဒုတိယအကြီးဆုံး မြို့ဖြစ်တဲ့ လီနင်ဂရက်
( ယနေ့ခေတ်ကာလအခေါ် စိန့်ပီတာဘတ်စ် )ကို
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ ၁၉၄၁မှာ ဖင်လန်နဲ့
ဂျာမနီတို့က မြို့ကို ပြင်ပ အဆက်အသွယ်ပြတ်အောင်
ဒီပိတ်ဆို့ စီးနင်းမှုဟာ နှစ်နှစ် လေးလ နှစ်ပတ်နှင့်
ငါးရက်ကြာ ရက်ပေါင်း ၈၇၂ရက်တာ ကြာမြင့်ပြီး
အောင်ပွဲခံဖို့ ဖိတ်စာတွေ ကြိုရိုက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ဒီပိတ်ဆို့စီးနင်းခံရတဲ့ လီနင်ဂရက်မြို့ကြီးကို
ကယ်တင်ခဲ့ကြတဲ့ လူတွေအကြောင်းပါ။ စစ်ပွဲတစ်ပွဲ
နိုင်ဖို့ဆိုတာ အာဇာနည်တွေ ဟောတစ်ယောက်
ဟောတစ်ယောက် ပေါ်လာရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။
ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စု ဒြပ်မှုန်ကလေးတွေ ပေါင်းစည်းပြီး
အချိန်အခါသင့်တဲ့အခါ ရလာတဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုပါပဲ။
မာလိန်မှူးတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်သိ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်
ဒါတွေဟာ ထင်သာတဲ့အရာတွေကို ရေးပြထားတာပါပဲ။
များပြားလွန်းတဲ့ သူ့နေရာနဲ့သူ အရေးပါနေတဲ့
ဇာတ်ကောင်‌တွေကို တစ်ယောက်မကျန် အသက်ဝင်အောင်
ပုံဖော်သွားနိုင်တဲ့ ဒါရိုက်တာရဲ့ တင်ဆက်ပြသမှုကလည်း အထင်ကရပါပဲ…
ထင်မှတ်မထားတဲ့ twistလေးတစ်ခုနဲ့လည်း ဇာတ်အိမ်ကို
ပြောကြတာတော့ Apocalypse Nowဟာ
အကောင်းဆုံးစစ်ကားတဲ့။ ကျွန်တော်တော့ စစ်ကား
သမိုင်းဆိုတာ စစ်နိုင်တဲ့ဘက်က ရေးကြတာဆိုတော့
လက်နက်တွေ ပေါက်ကွဲမှုတွေ သေကြေမှုတွေ
အလောင်းတွေ သွေးတွေ။ ဒီအပေါ်ယံအမြင်တွေ
အကုန် ဖယ်ကြည့်လိုက်ရင် စစ်ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့
အထင်ရှားဆုံးမြင်ရမယ့် အရာက လူ့စိတ်ပါပဲ။ ဒါရိုက်တာ
ဖရန်စစ် ကော်ပိုလာက ဒီအချက်ကို အရဖမ်းသွားတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ စစ်တိုက်ခန်းနည်းနည်း
တယ်။ ဒီကားကြည့်ပြီး ခင်ဗျားရူးချင်သွားတယ်ဆိုရင်လည်း
မထူးဆန်းဘူး ဒါရိုက်တာရော မင်းသားရော ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်နေတုန်း
ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ တစ်ချို့ဇာတ်ကွက်တွေအရတော့ ဒါရိုက်တာကို
အမေရိကန်မှဟုတ်ပါလေစလို့ ပြန်ရှာကြည့်လိုက်ရတယ်။ သူရဲဘောကြောင် အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ တစ်စက်မှသုံးမရတဲ့
ခဏခဏကို ပြသွားတယ်။ ဒီထဲကအမေရိကန်စစ်သားတွေက
ပုံမှန်မြင်‌နေကြတွေလို သနားစိတ်အပြည့်နဲ့ လူတော်Great
ကြီး‌တွေမဟုတ်ဘူး။ စစ်သားတွေရဲ့ ကြောက်စိတ်နဲ့
စစ်မှုထမ်းတွေရဲ့ တလွဲလုပ်ရပ်တွေ အတော်မြင်ရတယ်။
ပါးလျနေတာကို ဒါရိုက်တာက ကောင်းကောင်းကြီး
လူသားဆန်မှု စစ်ပွဲမှာ လူသားဆန်မှုက အရေးကြီးသလား
ဒီအဖြေကို ရုပ်ရှင်ထဲ မာလွန်ဘရန်ဒိုကြီးဖြေသွားတဲ့
အဖြေက ကြက်သီးထစရာကောင်းတယ်။ ဒီစစ်ကားက
စိတ် ဒါမှမဟုတ် စစ်သားတစ်ယောက်မှာရှိရမယ့်စိတ်ကို
အဲ့ဒီအမြင်ကို လူတိုင်းတော့ လက်ခံနိုင်မယ်မထင်ဘူး။
ကာလ်နယ်ကတ်ဇ်ရဲ့ အမြင်ဟာ ဘယ်လိုမှ လူမဆန်ဘူး။
အမေရိကန်ဟာ ဗီယက်နမ်လိုနေရာမျိုးမှာ စစ်နိုင်ဖို့
ဘာမှမခက်ပါဘူး။ ခက်နေတာက လုပ်ချင်သလိုလုပ်ရင်
ဖြစ်လာမယ့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့ အမြင်ပါပဲ။ကမ္ဘာ့နိုင်င‌ံရေးမှာ
တစ်ခါတလေ စစ်ရေးတွေဟာ ထိုးကြွေးခံရတဲ့ နယ်ရုပ်တွေ
အမြင်မှာကျ ဒါတွေက မဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေပဲ။
သူ့အမြင်မှာ စစ်သားကောင်းဟာ လူကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး
လို့ ယူဆတယ်။ စာနာမှုရှိတဲ့စစ်သားဟာ စစ်သားကောင်း
မဟုတ်ဘူးပေါ့။‌ဒီတော့ သူသူလျှိုလို့ယူဆတဲ့ လူလေးယောက်ကို
အထက်မိန့်မရဘဲ သတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဒီ အမိန့်ဖီဆန်ပြီး
တောခိုသွားတဲ့ ကာလ်နယ်ကတ်ဇ်ကို လုပ်ကြံဖို့
အထူးတပ်သားတစ်ယောက်ကို ကမ္ဘောဒီးယား ဗီယက်နမ်
ဒီလောက်ပါပဲ။တစ်ခုရှိတာက ခင်ဗျားသာ သေချာ
စီးမျောပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီခရီးမှာ ခင်ဗျားလည်း
ပါသွားလိမ့်မယ်။ အပြန်လမ်းမှာတော့ ခင်ဗျားဟာ
အရင်က ခင်ဗျား ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်တော့မယ်။
ခင်ဗျားသာ ဒီရုပ်ရှင်အပြီး အမှန်နဲ့အမှားကြား
မျဉ်းကသိပ်ပါးတယ်။ အမှန်နဲ့အမှားထက် ပိုအရေးကြီးတာက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပဲ။ ကာလ်နယ်ကတ်ဇ်က
ဒီအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။
ဝီလ်လတ်ကလည်း သူသိတဲ့အမှန်ကို ကျောခိုင်းပြီး
အရူးတွေကြားမှာ သွားမှန်နေလို့မရဘူး။ သူတို့နဲ့မတူရင်
အရူးတွေအတွက် ခင်ဗျားက အရူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။
Apocalypse Nowကို God Fatherရုပ်ရှင်ရဲ့
God Fatherကြီး မာလွန်ဘရန်ဒိုက Second leadနေရာက
Greatest War Film of All Timeလို့
သူတို့ကိုခြေမှုန်းမယ့်ဂျပန်အင်ပါယာတပ်ကို အောလ်ဂရင်းက လေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Mission impossible ဇာတ်ကားတွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မင်းသား
Korean မင်းသား Jang Dong-gun (ဒါရိုက်တာရင်) နဲ့ မင်းသား Joe Odagiri ရယ်
မင်းသမီး Fan Bingbing တို့ပါဝင်ထားတဲ့ စစ်ကားလို့ဆိုရမယ့်ဇာတ်ကားပါ။
တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ IMDb Rating(7.7/10)ရရှိထားပါတယ်။
အဟောင်းဖြစ်ပြီး အရင်က တင်ပေးခဲ့ဘူးပေမယ့် ကွာလတီ ကောင်းတာကို
ပြန်လည်ခံစားစေခြင်တာရယ် ဘယ်နှစ်ခါကြည့်ကြည့် မရိုးတဲ့ အတွက်
ငယ်စဉ်ကလေး ဘဝကတည်းက ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့ကြတဲ့
သူငယ်ချင်းမဟုတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်
လူမျိုးမတူတဲ့ လူငယ်လေး ၂ယောက်
တချိန်မှာ ဘဝ အလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ
လောကဓံ အလှည့်အပြောင်းကို တွေ့ကြုံမိလာတဲ့အခါမှာတော့
ဘယ်လောက်ပဲ မုန်းတီးနေပါစေ ပစ်မထားရက်တဲ့
နိုင်ငံနားနီးချင်း စစ်ရဲ့ စတေးခံလူငယ်လေး ၂ယောက်
နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကြမလဲ ဆိုတာကို
Rotten Tomatoes – 92 %
Ye Liu – Lu Jianxiong
Gao Yuanyuan – Miss Jiang
Hideo Nakaizumi – Kadokawa
Ryu Kohata – Ida
ဒီကားဟာဆိုရင် ဟိုးအရင်ခေတ် စစ်ပွဲအကြောင်းကို ဖြူမဲ ပုံစံနဲ့ရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ
Rating တွေလည်းအရမ်းကောင်းခဲ့ပြီး ကြည့်ရှူသူအရမ်းများခဲ့ပါတယ်
ဇာတ်လမ်းဟာဆိုရင် ဒုတိယတရုတ်-ဂျပန်စစ်ပွဲအတွင်း ၁၉၃၇ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲအကြောင်းကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာပါ
ဂျပန်အင်ပါယာဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါက တရုတ်မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နန့်ကျင်းမြို့ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒါကို ” နန့်ကျင်း သတ်ဖြတ်မှု့ ” လို့ခေါ်ကြပြီး အကြောင်းအရင်းကတော့ တရုတ်စစ်သုံ့ပန်းတွေနဲ့ မြိုု့သူမြို့သားတွေကို ရက်ပေါင်းများစွာ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြလို့ပါ
ဤရုပ်ရှင်သည်တရုတ်စစ်သား၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဂျပန်စစ်သား၊ နိုင်ငံခြားသာသနာပြုနှင့်နာဇီစီးပွားရေးသမားဂျွန်ရာဘီ (တရုတ်မြို့သားတွေကိုကူညီသူ)အပါအဝင်
သမိုင်းကြောင်းများ အကြောင်းကို ရိုက်ပြထားသောဇာတ်ကားဖြစ်သည် ။
( Rated R ဖြစ်သည့် အတွက် ကလေးသူငယ်များ ကြည့်ရှူ့ရန်မသင့်တော်ပါ )
august 21 2020မှာထွက်လာပြီး Budget $80millionသုံးထားတဲ့
Box office ဝင်ငွေ $451.5million စံချိန်တင်လည်းချိုးထားပါတယ်
ပင်မတပ်ကြီးပြန်ဆုတ်သွားပေမယ့် ကျန်ရှိနေတဲ့တပ်သား၈၀၀ ရဲ့
လက်နက်အင်အားမမျှတဲ့ကြားက အရှုံးမပေးပဲအသက်စွန့်ပြီး ၄ရက်ကြာ
အသက်စွန့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဂျပန်တွေက အင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပေမယ့်
ဒါပေမယ်လဲ နယ်မြေသစ်ရဲတံတားကိုဖြတ်တာနဲ့ ဂျပန်တွေပစ်သတ်တာခံရမှာပါ….
လိုနေတဲ့ရိက္ခာတွေကို အသက်စွန့်ပြီး ပို့ပေးမယ့်သူတွေပေါလာတဲ့အခါ….
ရန်ငြိုးမဖွဲ့လိုလို့ တရုတ်နိုင်ငံကို ဘယ်သူမှတပ်ကူမပေးလိုတဲ့အခါ…..
တပ်သား၈၀၀ ကျော်ရဲ့အရှုံးမ ပေးပဲ အသက်စွန့်တိုက်ခိုက်မှုဟာ
Peak Rescue ( 2019 )
ဒီကားလေးဟာ 2019ထွက် Action,Drama,War အမျိုးအစားဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီကားဟာ Orilandမှာကျင်းပတဲ့ Asian Summit အကြီးအကဲပေါင်းစုံ
ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပွဲကြီးမှာ အကြမ်းဖက်သမားတစ်စုဟာ Dirty bombsနဲ့
Dirty bullets ကို Udriveနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီး ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစည်နေကြပါတယ်..
အစိုးရအတွက်ဆောင်ရွက်ရင်း Dirty bombsကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ UDriveကို ယူဆောင်ထားတဲ့အခါ
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ထိုင်းဘုရင် နရဲစွမ်ရဲ့အကြောင်းကို
အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားမှာတော့ ဟံသာဝတီပြည်ကို ဓားစာခံအနေနဲ့
အခေါ်ခံခဲ့ရတဲ့ မင်းသားလေး နရဲစွမ် ရဲ့ အကြောင်းပါပဲ။
ဟံသာဝတီပြည့်ကို ခေါ်ပြီး မင်းသားတို့
တတ်သင့်တတ်အပ်တဲ့ အဋ္ဌာရဿ ပညာရပ်တွေကို
ဆုပန်ကလျာ နဲ့ ဘုရင့်နောင်တို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုလည်း
နရဲစွမ် နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာတို့ရဲ့ ငယ်ဘဝအားပြိုင်မှုတွေကိုလည်း
ထိုင်း-မြန်မာ သမိုင်းမှာ ရာဇဝင်တွင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို
ဆိုမာလီနိုင်ငံဟာ ၁၉၉၀ဝန်းကျင်က ငတ်မွတ်မှုကြောင့်
Mohamed Farrah Aididဟာ အာဏာအရှိဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး
ထိုအချိန်က မြို့တော်မိုဂါဒစ်ရှူ းကို အုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်
၁၉၉၃ခုနှစ်အတွင်း မြို့တော်မိုဂါဒစ်ရှူ းမှာ ထုံးစံအတိုင်းအမေရိကန်တို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်
Aididစစ်တပ်ရဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ အပြင်းအထန်ခုခံမှုတွေကြောင့်
ဘလက်ဟော့ဟယ်ရီကော်ပတာ တွေပျက်ကျမှုမှစတင်ကာ အလွဲလွဲချော်ချာ်ဖြစ်ပြီး
အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာ အချိန်မှီမြို့ထဲကပြန်မထွက်နိုင်ပဲ ပိတ်မိကာ
ဒီဇာတ်ကားဟာထိုအခါက အမေရိကန်နဲ့ဆိုမာလီတွေရဲ့ အပြင်းအထန်တိုက်ခဲ့ကြပုံတွေ
စစ်ရဲ့မာန် စစ်ရဲ့ဓလေ့နဲ့ စစ်ရဲ့ကြေကွဲဖွယ်ရာတွေကို အပီပြင်ဆုံးရိုက်ကူးပြထားပြီး
Imdb 7.7နဲ့ RT 76%ထိရရှိထားပြီး စစ်ကားဆိုမှစစ်ကားကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့
အမြန်ဆုံးသာ download လုပ်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
အီရတ်မှာ ISIS တေွနဲ့ အီရတ်နိုင်ငံသား အခြားတပ်ဖွဲ့တွေ
ISIS တွေကို အီရတ်မှာ DAESH အဖွဲ႕တွေလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
ISIS တွေဟာ သူတို့ဖမ်းမိတဲ့ အီရတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို
အပြစ်ချေဖို့နဲ့ ဘက်ပြောင်းဖို့ ခွင့်ပြုပြီး လူသစ်စုတတ်ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ISIS တွေကို သတ်တဲ့နေရာမှာ လက်သံပြောင်လွန်းလို့ မိတာနဲ့
ဘက်ပြောင်းခွင့်မရှိဘဲ အသတ်ခံရတဲ့ တပ်ဖွဲ့တစ်ခုတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
Nineveh SWAT လို့ခေါ်တဲ့ အီရတ်အထူးတပ်ဖွဲ့ပါပဲ။
ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ အဲဒီတပ်ဖွဲ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်
တကယ့်ဖြစ်ရပ်ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အီရတ်ရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Mosul ကို ISIS တွေ အတော်ကြာ ကြီးစိုးခဲ့ပြီး
အဲဒီ မြို့မှာ နောက်ဆုံးစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုကို လာထမ်းဆောင်တဲ့
SWAT အဖွဲ႕တွေနဲ့ DAESH တွေ ရင်ဆိုင်ကြပုံကို ပြသထားတာပါ။
စစ်ကားကောင်းကောင်း ငတ်နေတဲ့သူတွေ အတွက်
Sacrifice ( 2020 )အညွှန်း
2020 october 23မှာထွက်လာတဲ့ Action Drama War ဖြစ်ရပ်မှန်စစ်ကားကောင်းပါ
Box officeမှာ $161,047608ဝင်ငွေစံချိန်တင်ရရှိထားလို့ စိတ်ကျေနပ်မှုရစေမှာသေချာပါတယ်
1953Korea Warရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကာလ အမေရိကန်နဲ့ ကျင်းကန်းချွမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ် တရုတ်ဘက်က တပ်ကူပေါင်းသောင်းချီကို မနက်6နာရီမတိုင်ခင်ပို့ပေးရမှာပါ…
ဲတိုက်ပွဲနယ်မြေကိုရောက်ဖို့ ရေစီးသန်လှတဲ့မြစ်ကြောင့် တံတားကနေကျော်ဖြတ်မှရနိုင်ပါမယ်
အမေရိကန် လေတပ်ကယာဉ်ပျံတွေဟာ တရုတ်ဘက်က
ဘယ်လိုတွေအသက်စွန့် ပြီးပို့ဆောင်ပေးမလဲဆိုတာကို ရင်နင့်ဖွယ်တွေ့မြင်ရမှာပါ…..
ရိုက်ကူးပြသထားလို့ စစ်ပွဲတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကိုပိုနားလည်လာမိပါတယ်
အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီအလိုက် သူတို့ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပျက်မှုတွေ ခံစားမှုတွေကိုရိုက်ပြတာဖြစ်လို့
စစ်ပွဲကိုရှုထောင့်အမျိုးမျိုးက ရိုက်ကူးပြလို့ စစ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကို တွေ့မြင်ခံစားမိပါတယ်
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးတွေအကြောင်းကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Mobile Legend ထဲက Hero တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Zhao Zilong ရဲ့အကြောင်းကို
ကျစ်လုံဟာဆိုရင် ရှုံးပွဲမရှိဖူးတဲ့ အဖြူရောင်မြင်းစီးသူရဲကောင်းအဖွဲ့ရဲ့
စစ်သူကြီးတစ်ယောက်ပါ ဒါပေမဲ့ ကျစ်လုံဟာ ချင်ကျုံစစ်ပွဲမှာ ညီနောင်အများစု
တိုက်ပွဲကျခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ တိုက်ပွဲကျသွားတဲ့ အဖြစ်ကြောင့်
နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးတွေကနေ အနားယူခဲ့ပါတယ် သို့ပေမဲ့ ခုနှစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာ
ကျစ်လုံအနေနဲ့ ပရမ်းပတာဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးကို ပြန်လည်မွန်းမံ့ဖို့
နိုင်ငံအရှုပ်အထွေးတွေနဲ့ ပြန်လည် ပတ်သတ်ရတဲ့အခါမှာတော့ ကျစ်လုံအနေနဲ့
ရှုပ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ နိုင်ငံ့အရေးတွေကြားမှာ ဘယ်လိုနောက်တစ်ဖန်
ပြန်ရပ်တည်မလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြပါဦးနော်
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း မုန်တိုင်းထန်တဲ့ ညတစ်ည၊
ပျံတက်လုဆဲဆဲ ဗုံးကြဲလေယာဉ်တစ်စင်းပေါ်ကို ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ကုန်စည်တစ်မျိုးသယ်ဆောင်လာတဲ့
လေယာဉ်ပေါ်က အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အထောက်အထားတွေရော သူတို့ကြောက်ရတဲ့
နာမည်ဆိုးနဲ့အထက်လူကြီးကြောင့်သာ လက်ခံလိုက်ရပေမယ့် အင်တင်တင်ဖြစ်ရုံမက သူ့အပေါ် ရိုင်းရိုင်းပျပျဆက်ဆံတယ်။
ဒါပေမယ့် သူနဲ့ စကားတွေပြောရင်း ဖလှယ်ရင်း ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ ဒီကုန်စည်အပေါ်ကိုသံသယတွေကြီးထွားလာပြီး အမှောင်ထဲက
တိမ်တွေကြားထဲ အရိပ်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ကြရတဲ့အခါမှာတော့? အဲ့ဒါ ရန်သူ ဂျပန်လေယာဉ်တွေဖြစ်မလား? ဒါမှမဟုတ်
လေယာဉ်ကြုံလိုက်တဲ့ မိန်းမကြောင့်ဖြစ်မလား? စစ်အတွင်းကာလ အက်ရှင် နဲ့ အရင်တုန်းက နာမည်ကျော် gremlins မှင်စာတွေနဲ့
Horror ကိုရောမွှေထားတဲ့ကားပါပဲ။ ဇာတ်အစကနေ ပျိုးလာတဲ့ သိချင်စိတ်ကိုအဆုံးထိဆွဲခေါ်နိုင်သလို အထူးပြုလုပ်ချက်တွေလဲ
မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အားလုံးရဲ့ အသည်းကျော်လေး Chloë Grace Moretz ကိုဇာတ်အစကနေအဆုံးထိ
PART2SBS Drama Awards(2020)
SBS Drama Awards(2020)PART 2
SBSရုပ်သံကလွှင့်တဲ့ စီးရီးတွေကနေ အကောင်းဆုံးသောဆုအသီးသီးပေးတဲ့ပွဲကြီးပြီးသွားပါပြီ….
တကယ်တော့ SBSရုပ်သံစီးရီးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အတော်ရင်းနှီးပါတယ်…
ဟိုးစလွှင့်တဲ့အချိန်ကစလို့ ယခုအချိန်ထိစီးရီးတွေဟာ ကိုယ်နိုင်ငံကလွှင့်တဲ့ဇာတ်ကားတွေနီးပါး
မှတ်မှတ်ရရရှိနေတတ်ပါတယ်…နောက်တစ်ခုက ဆုပေးပွဲကြီးစဖွင့်တာကစလို့ ကိုရိုနာကြောင့် ဆုတက်ရောက်ယူတဲ့အစီအစဉ်တစ်ချို့မှာ
ကန့်သတ်ခဲ့ရတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ပုံတွေက တကယ့်ကိုအမိုက်စားတွေပါပဲ…
SBSကို ဘယ်လိုစတင်ဖြစ်တယ်….SBSကလွှင့်တဲ့စီးရီးတွေကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ ဘယ်လောက်ကျေနပ်ပျှော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်…
SBS ဘယ်လိုအောင်မြင်လာတယ်…ဘယ်လောက်အထိ နိုင်ငံတကာအပေါ်လွှမ်းမိုးလာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေအစတင်ဆက်ခဲ့ပြီး
တစ်ချိန်တုန်းက ပရိတ်သတ်တွေအနှစ်ခြိုက်ဆုံး စီးရီးတွေကိုလည်း အလွမ်းပြေပြသသွားပါတယ်…
တစ်ချို့လည်း LIVEကြည့်ပြီးကြပေမဲ့ Kdrama ပရိတ်သတ်တွေအတွက် သူတို့အားပေးတဲ့ သူတွေ
ကို ဗဟုသုတရစေခြင်းအလို့ငှါတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်…Part 1,2,3ရှိတာမို့ ကျန်အပိုင်းများကို မကြာမီ
PART3SBS Drama Awards(2020)Final
SBS Drama Awards(2020)PART 3
၁၄ရာစု အင်္ဂလန်နဲ့ စကော့တလန်ကြား ပဋိပခဖြစ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို အခြေခံထားတာပါ။
William Wallace ရဲ့ အဖေရော အစ်ကိုရော အခြားချစ်ရတဲ့သူ တော်တော်များများပါ သူငယ်စဉ်ဘဝမှာပင် စကော့ပြည်ကို အင်္ဂလန်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရင်း အသက်ပေးသွားခဲ့ကြရတာပါ။
ဒီအတိုင်းဘဲနေလာရင်းက သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့တစ်နေ့၊ သန်မာလာတဲ့တစ်နေ့၊ သူ့ရဲ့ချစ်သူကို အင်္ဂလန်စစ်သား တစ်ယောက်က အဓ္ဓမပြုဖို့်ကြိုးစားရင်း ကောင်မလေးက ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြန်တုံ့ပြန်လို့ဆိုပြီး ကွပ်မျက်ခံလိုက်ရတဲ့တစ်နေ့၊ အဲဒီနေ့မှာ Wallace ဟာသူ့ရွာကိုဦးစီးပြီး ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ အင်္ဂလန် မင်းဆိုးမင်းညစ်ကို ပြန်ပုန်ကန်ပြီး စကော့တလန်ပြည်ကြီး လွတ်လပ်ရေးမရမချင်း တိုက်သွားပုံကို ပြထားတာပါ။ လွတ်လပ်ရေးမရခင် သူကွပ်မျက်ခံလိုက်ရပေမယ့် သူအစပြုပေးခဲ့တဲ့အတွက် ရဲရင့်တဲ့ စကော့တွေနောက်ဆုံး လွတ်လပ်ရေးရအောင် တိုက်နိုင်တဲ့အထိ ဒီဇာတ်ကားက ပြောပေးသွားမှာပါ။
William Wallace အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သွားတဲ့ Mel Gibson ရော Robert the Bruce အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သွားတဲ့ Angus McFadyen ရောကို တကယ်ကို သဘောကျမိတယ်ဗျ။ ဒီဇာတ်ကားက သမိုင်းကြောင်းကိုပုံဖော်ထားပေမယ့် သမိုင်းမှာမပါခဲ့တဲ့ အမှားတွေကို ရိုက်ထားတာကများနေတယ်ဆိုတာ တော်တော်များများလဲ သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူကမှ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဒီဇာတ်ကားကြည့်ပြီး တစ်ခုခုမခံစားရဘူး မကောင်းဘူးလို့ ပြောတာဘယ်နယောက်ရှိလို့လဲ။ Wallace ဟာ Princess Isbelle နဲ့ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာလို သမိုင်းမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မကြိုက်ခဲ့ပါဘူး ဒါပေမယ့် အဲဒါကိုယ်တိုင်က ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေထဲက တစ်ခုမဟုတ်လား။
– Sir Wallace ကို Robert the Bruce က လူမဆန်တဲ့ ဲ့နည်းတွေနဲ့ နှိပ်စက်နေတဲ့အခန်းတွေကသာ တစ်ခုခုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်
– အဲလိုနှိပ်စက်နေတဲ့ အသံတွေကို ရဲတိုက်ထဲက Princess Isbelle ကြားပြီး ရင်ကွဲမတတ်ခံစားနေရတဲ့ အခန်းက တစ်ခုခုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်
– William Wallace ရဲ့လည်ပင်းပေါ်ကို ပုဆိန်နဲ့ခုတ်ခါနီးလေး သူ့မျက်လုံးထဲ တမလွန်ကချစ်သူကို မြင်ယောင်နေတဲ့အခန်းကသာ တစ်ခုခုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်
– ခေါင်းပြတ်ပြီး လက်ထဲက ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားတဲ့ ပဝါလေး slow motion နဲ့မြေကြီးပေါ်ကျသွားတဲ့ အခန်းကသာ တစ်ခုခုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်
နောက်ဆုံး သူသေပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ စကော့တွေအားလုံး အင်္ဂလန်ကို ပြန်တိုက်ခါနီးလေး စစ်မြေပြင်မှာ Hamish သူ့ရဲ့ဓား လေပေါ်ပစ်တင်လိုက်တဲ့အခန်းကတော့ တစ်ခုခုပေးနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
James Horner ရဲ့ စကော့ နောက်ခံဇာတ်ဝင်တီးလုံးကလဲ ပရိတ်သတ်တွေကို ဝမ်းနည်းတစ်လှည့် အားတက်တစ်လှည့် ဖြစ်စေမှာသေချာပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကြည့်ပြီး တော်တော်ကြာတဲ့အထိ Wallace ရဲ့ “Freeeeedom” ဆိုတဲ့အသံကြီးကို ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ နားထဲက လွယ်လွယ်နဲ့ ဖျောက်ပစ်လို့ရမယ်လို့တော့ တကယ်မထင်ဘူးဗျာ။
ဒီဇာတ်ကားကဘဲ producer director actor “Mel Gibson” ကို Brilliant Director အဖြစ် သက်သေပြလိုက်တာပါ။ ဒရာမာနည်းနည်းရောထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားမှာ အချစ်ရော အက်ရှင်ရော စစ်ပွဲရောကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းခံစားရမှာပါ။
OSCAR ၁၀ဆုဆန်ကာတင်ပြီး ဇာတ်ကားဆု ဒါရိုက်တာဆု အပါအဝင် စုစုပေါင်းငါးဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မကြည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့် မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် လာအိုတို့ ပူးပေါင်းကာ မူးယစ်ရာဇဝတ်မှုကြီးတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပုံကို ရိုက်ကူးထားသည့် Operation Mekong တရုတ်-ဟောင်ကောင် မှုခင်းအက်ရှင် ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် …
မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့် မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် လာအိုတို့ ပူးပေါင်းကာ မူးယစ်ရာဇဝတ်မှု ကြီးတစ်ခုကို ကြိုးစားဖော်ထုတ်ကြပုံကို ရိုက်ကူး တင်ဆက်ထားသည့် ယင်းဇာတ်ကားကို ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Dante Lam က ပုံဖော်ရိုက်ကူးထား ခြင်းဖြစ်ပြီး အဓိကသရုပ်ဆောင် များအဖြစ် ထိုင်ဝမ်တေးသံရှင်နှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ် ဆောင် Eddie Peng နှင့် တရုတ်ရုပ်ရှင်မင်းသား Zhang Hanyu တို့ ပါဝင်ထားပါတယ် … ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားအဖြစ် ပိတ်ကားပေါ်မှာ ပုံဖော်ထားခဲ့ပါတယ် …
ဇာတ်လမ်းအကြောင်း ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင် ….
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့ မဲခေါင် မြစ်ဝှမ်းမှာ ကုန်စည်များသယ်ဆောင်လတဲ့ ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကို လူဆိုးဓားပြအုပ်စု တစ်စုက ဓားပြတိုက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး သင်္ဘော ပေါ်ပါ တရုတ်သင်္ဘောသား ၁၃ ယောက် ရက်ရက် စက်စက် အသတ်ခံခဲ့ရတယ် …
အသတ်ခံရသည့် အဆိုပါတရုတ်သင်္ဘောသား အလောင်းများနှင့်အတူ စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးပြား ကိုးသိန်းကိုလည်း တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ် …
ထိုကုန်သင်္ဘောကို တိုက်ခိုက်သူများမှာ မဲခေါင် မြစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက် မူးယစ်ဆေးဝါးလက်ကားရောင်း ဝယ်ဖောက်ကားနေသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းဖြစ်ပြီး မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ထိုင်း၊ လာအိုနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံတို့တွက် ကျက်စားနေသည့် ကြီးမားသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးကွန်ရက်ကြီးရှိနေသည်ကို သိလာရပါတယ် …
ဒါ့ကြောင့်မို့ တရုတ်နိုင်ငံမှ အထူးမူးယစ်နှိမ်နင်းရေး အရာရှိဖြစ်သည့် (မင်းသား Zhang Hanyu) ခေါင်းဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ လာအိုနိုင်ငံမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အတူပူးပေါင်း ပါဝင်ပြီး … အဆိုပါမူးယစ်ရာဇဝတ်မှုအား ကြိုးစားဖော် ထုတ်ကြပုံကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်က အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုအပေါ် အခြေခံရိုက်ကူးထား သည့် မှုခင်းအက်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ …
ကြာမြင့်ချိန် နှစ်နာရီနီးပါးခန့် ကြာမြင့်သည့် အဆိုပါဇာတ်ကားကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်က တရုတ်နိုင်ငံ ပေဂျင်း၊ ယူနန်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Box Office မှာ အမြတ်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 173 million ကျော် ရရှိခဲ့ပါတယ် …
Rating အရ ကြည့်မယ်ဆိုလဲ IMDb မှာ 6.6/10 နှင့် Rotten Tomatoes မှာ 86% ရရှိထားခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ် …
The Legend Makers ဇာတ်ကားကတော့ ဗီယက်နမ်စစ်ကားတစ်ကားပါ။ဒီဇာတ်ကားက 1960တုန်းက အမေရိကန်နဲ့ဗီယက်နမ်စစ်ပွဒအကြောင်းရိုက်ပြထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်တွေရဲ့စစ်လက်နက်အသစ်တွေ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ဗီယက်နမ်တွေအထိနာနေချိန်မှာ
အမျိုးသား အမျိုးသမီးမကျန် စစ်ထဲသို့ဝင်ကာ နိုင်ငံအတွက် အသက်စွန့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်။
ကိုယ့်ရွာကိုယ်ကာကွယ်ခဲ့ရတယ်။တောင်ပိုင်း တိုက်ပွဲက ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှ ဗီယက်နမ်စစ်တပ်တွေမှာ
ဗိုလ်ကြီး Dinhရဲ့ အမိန့်အရ 1968ကနေ 1975အထိ ၇နှစ်တိုင်တိုင် တပ်သားတွေက အခက်တွေကိုဖြတ်ကျော်ကာ
အန္တရာယ်တွေကြားကနေ ၅၀၀၀ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ လောင်စာဆီသယ်ယူတဲ့ပိုက်လိုင်းတွေကို
မြောက်ပိုင်းကနေ တောင်ပိုင်းအထိ တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ စစ်ပွဲအတွင်းက ပြည်သူတွေနဲ့ စစ်သားတွေဘယ်လိုရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။
English, Action, Drama, Fantasy
English, Drama, Fantasy, Horror
English, Drama, Fantasy, Mystery